၂၀၁၁ ပထမနှစ်ဝက်ရဲ့ ပဲမျိုးစုံကုန်သွယ်မှုနဲ့ ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွက် အလားအလာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ နှစ်ဝက်ကုန်ဆုံးလို့ ဒုတိယနှစ်ဝက်ကို ချင်းနင်းဝင်ရောက်လို့လာပါပြီ။ ကဏ္ဍအလိုက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဏ္ဍစုံတွေမှာ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကို လေ့လာ ကြည့်မိ တဲ့အခါ မြန်မာ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းမှာ ပမာဏများများ တင်ပို့မှုရှိနေတဲ့ ပဲမျိုးစုံကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာမိခဲ့ပါတယ်။ ပထမနှစ်ဝက်တင်ပို့မှု မနှစ်ကထက် ပိုပေမယ့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကိုမမီ ယခုနှစ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်း ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် တန်ချိန် ၆ သိန်းနီးပါးရှိခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ ဇန်နဝါရီလက ဇွန်လကုန်ထိ တင်ပို့ပြီးစီးမှု တန်ချိန် ၅ သိန်းခွဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် တန် ၅ သောင်းလောက် ပိုမိုတင်ပို့ပြီး တာတွေ့နိုင်ပေမဲ့၂ဝဝ၉ ခုနှစ်ကာလတူတင်ပို့မှု တန် ၉ သိန်းကျော်နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ဒီနှစ် ပထမ ၆ လမှာတန် ၃ သိန်းကျော် လောက် လျော့ကျတင်ပို့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကပြက္ခဒိန်နှစ် ပထမ ၆လရဲ့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့ပြီးစီးမှုကို အရင်နှစ်များရဲ့ ကာလတူနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာပါ။ ရေတွက်ပုံတန်ချိန်ထောင်ပေါင်းပဲအမျိုးအစား ၂ဝ၁၁ ပထမ ၆ လ ၂ဝ၁ဝ ပထမ ၆ လ ၂ဝဝ၉ ပထမ ၆ လမတ်ပဲ ၂၉၄ .၁၈၁ ၂၆ဝ .၁၉၉ ၁၈၈ .၃၉၉ပဲတီစိမ်း ၁၁၉ .၆၇၆ ၁၅၂ .၃ဝ၃ ၁၇ဝ .၆၃၂ပဲစင်းငုံ ၁၁၂ .၃၅၃ ၉၁ .၄၄၃ ၃၇၄ .ဝ၄၉ကုလားပဲ ၃၂ .၃၅၉ ၅ .၃၄၅ ၂၄ .၃၉ဝဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ၃ လအတွင်း ပဲတင်ပို့မှု စံချိန်တင် ပမာဏနဲ့ပိုမို ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ ပထမ ၃ လအတွင်း တင်ပို့ပြီးစီးမှုကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ လက်ရှိဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိ တန်ချိန် ၄ သိန်း တင်ပို့ပြီးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ ကာလတူ တင်ပို့ပြီးစီးမှု အနေနဲ့ တန်ချိန် ၂ သိန်းခွဲကျော် ဖြစ်လို့ ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ဒီဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ၃ အတွင်းမှာ တန်ချိန် ၁ သိန်းခွဲ လောက်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ ရေတွက်ပုံတန်ချိန်ထောင်ပေါင်းပဲအမျိုးအစား ၁ .၄ .၂ဝ၁၁ မှ ၁ .၇ .၂ဝ၁၁ ၁ .၄ .၂ဝ၁ဝ မှ ၁ .၇ .၂ဝ၁ဝမတ်ပဲ ၁၈၉ .၆၅၇ ၁၂၇ .၂၅၈ပဲတီစိမ်း ၉၆ .၂၆၂ ၆၃ .၉၇၆ပဲစင်းငုံ ၄၈ .၃၇၃ ၃ဝ .၉၇ဝကုလားပဲဖြူလုံးကြီး ၂၈ .၄၄၄ ဝ .၄၆၇ပထမ ၃ လ အတွင်း ဈေးအမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ ပဲစပေါ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလကုန် ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာ ဝယ်လှောင်တဲ့ ကုန်သည် တွေကလည်းအရင်နှစ်တွေလို ဈေးအမြင့်မှန်းပြီး ဈေးပေးဝယ်ယူမှုတွေရှိသလို တောင်သူတွေကလည်း ဈေးကိုင်ရောင်းကြလို့ သီးနံှပေါ်စမှာပဲ ဈေးက ခေါင်ခိုက် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မတ်ပဲ FOB ဈေးဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လတွေမှာ တစ်တန်ကန်ဒေါ်လာ ၉ဝဝ အထက်မှာ ရှိနေသလို ပဲစင်းငုံ FOB ဈေးကလည်း ကန်ဒေါ်လာ ၉ဝဝ တော်တော်စွန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ပဲရိတ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ ပေါက်ဈေးနဲ့ ရောင်းခဲ့ကြတဲ့ တောင်သူများအနေနဲ့ ဒီနှစ်အနေအထားမှာ လက်ခမောင်း ခတ်နိုင်ပေမဲ့ ဈေးကိုင်ပြီး ပစ္စည်းတွေပိုက်ထားတဲ့ တောင်သူကြီးများ၊ လှောင်လက် သမားတွေအနေနဲ့ အကျဘက်ကို တောက်လျှောက် ဆင်းခဲ့တဲ့ ဒီနှစ်ပဲဈေးကွက်မှာ အထိနာခဲ့တယ်လို့ သတင်းစကားကြား သိရပါတယ်။ သြင်္ကန်အပြီး တက်ဈေးကို မျှော်ကိုးပြီး ပဲအရွှေ့နည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဲမျိုးစုံထွက်ရှိမှုဟာ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လမှာ အများဆုံးကာလ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ပြည်ပတင်ပို့မှု အများဆုံး ကာလဟာလည်း မတ်လ၊ ဧပြီလ တွေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယခင်နှစ်တွေရဲ့ တင်ပို့မှုကို လေ့လာရင် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်လုံး တင်ပို့မှုအနက် ပထမ ၆ လအတွင်းမှာ ပမာဏပိုမိုတင်ပို့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခုနှစ် တင်ပို့မှုအနေအထား ကိုကြည့်ရင် ပဲအများဆုံး ထွက်ရှိတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လတွေမှာ တင်ပို့မှုနည်းတဲ့ အနေအထားရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖောက်သည်အိန္ဒိယဈေးကွက်ကို လေ့လာကြည့်တော့ မနှစ်ကစိုက်ဧရိယာ တွေပိုပြီး ရာသီဥတုကလည်း မျက်နှာသာပေးခဲ့လို့ ပဲအထွက်တွေတိုးတယ်ဆိုပြီး ဝယ်လိုအားပါးပြီး ဈေးလျော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်လိုအားပါးပေမဲ့လည်း ပြည်တွင်း ကုန်သည်တွေက သြင်္ကန်အပြီးမှာတော့ ဈေးတက်မှာပဲဆိုပြီး ကြိုက်ဈေးမရလို့ မရောင်းကြတော့ ဇန်နဝါရီလ ကနေ မတ်လအထိ တင်ပို့မှုဟာ တစ်လကို တန် ၈ သောင်း ၉ သောင်းဝန်းကျင်နဲ့ ဧပြီလမှာတော့ တန် ၆သောင်းဝန်းကျင်သာ ခပ်ပါး ပါးပဲ တင်ပို့ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်၊ ဧပြီလတွေမှာ ပဲအရွေ့နည်းခဲ့လို့ ကုန်သည်တွေကဆိုပါတယ်။ မေနဲ့ ဇွန်မှ စံချိန်သစ်နဲ့ တင်ပို့နိုင် သြင်္ကန်အပြီးမှာတော့ ပြည်ပဝယ်လိုအားတွေရှိလာသလို ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေကလည်း ပိတ်ရက် ခံထားလို့ မတင်ရသေးတဲ့ ကုန်တွေအပြီးတင်ဖို့ရော၊ နောက်ထပ်စာချုပ်အသစ်အတွက်ပါ တင်ပို့မှုတွေ အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မေ၊ ဇွန်လမှာ ကွန်တိန်နာကားအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေမဲ့ တစ်လကို တန်ချိန် တစ်သိန်းခွဲ ဝန်းကျင်နဲ့ စံချိန်တင်တိုးတက် တင်ပို့နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ဇွန်လအတွင်းမှာ ပြည်ပပို့ကုန် ဝင်ငွေ တစ်ယူနစ်တန်ဖိုး အပြောင်း အလဲအတက်အကျကြမ်းခဲ့တာကြောင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက် ပဲအရောင်း အဝယ် နည်းနည်း တန့်သွားသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ငွေဈေးလဲလှယ်နှုန်းသာ တည်ငြိမ် နေခဲ့ မယ်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီးတင်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း ဝါရင့်ပဲကုန်သည်ကြီးတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါက ပြီးခဲ့ တဲ့လတွေရဲ့ အရောင်းအဝယ်အခြေအနေတွေပါ။ ကြိုက်ဈေးရလို့ ဝယ်လက်တွေ စိတ်ဝင်စားလာ လတ်တလော ရောင်းမှုအနေနဲ့ နေ့စဉ်ဆိုသလို ပြည်ပအဝယ်ရှိလို့ အရောင်းအဝယ်နေ့တိုင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပဲစင်းငုံနဲ့ အညာ ပဲတီစိမ်းတွေရဲ့ လက်ရှိပေါက်ဈေးတွေက ပြည်ပဝယ်လက်အကြိုက် တွေ့နေပြီဖြစ်လို့ နေ့စဉ် FOB အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ် ဆိုမှုတွေ များနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပဲစင်းငုံအနေနဲ့ လင်းခေးစတွေ ပြတ်သလောက်ဖြစ်နေလို့ ပဲစင်းငုံအနီစအဟောင်းရော အသစ်ပါ အဝယ်လိုက်လာပြီဖြစ်ပြီး ပဲတီစိမ်းဆိုရင်လည်း ဈေးကွက်ထဲဝင်လာတဲ့ အရည် အသွေးနိမ့် အညာပဲတီစိမ်းတွေကို ဆွဲနေတယ်လို့ ကုန်သည် တွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ မတ်ပဲ SQ၊ FAQ နဲ့ အခွံချွတ်စုစုပေါင်း တန် လေးသောင်းကျော်၊ ပဲတီ စိမ်း၊ ပဲတီရွှေဝါ စုစုပေါင်း တန် ၇ဝဝဝ၊ ပဲစင်းငုံနီ၊ ဖြူနီ၊ ခွဲခြမ်းတန် ၁၆ဝဝဝ ကျော်နဲ့ ကုလားပဲ တန် ၆ဝဝဝ လောက် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနှုန်း အတိုင်း အရောင်း အဝယ်ဖြစ်ပြီး တင်ပို့မယ်ဆိုရင် ဒီဇူလိုင်မှာလည်း ပဲအရွှေ့ကောင်းမယ့် အလားအလာ ရှိနေတဲ့သဘောပါ။ စိုက်ဧရိယာလျော့လို့ အိန္ဒိယပဲဈေး အကျတန့် လက်ရှိအိန္ဒိယအနေအထားကိုကြည့်ရင်ပဲ မုတ်သုံမိုးနောက်ကျပြီး မိုးနည်းပါးတဲ့အတွက် ပဲစိုက်ပျိုးမှု နှေးကွေးနေလို့ အရင်နှစ်စိုက်ပျိုးမှုကို မမီနိုင်ဘူးလို့ သတင်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အိန္ဒိယဈေးကွက်တွေမှာ ပဲလက်ကျန်တွေ အထူးသဖြင့် ပဲစင်းငုံလက်ကျန်တွေ အလုံအလောက်ရှိနေတယ် လို့ ဆိုပေမဲ့ စိုက်ဧရိယာလျော့ကျတဲ့ သတင်းတွေက ဈေးနှုန်းထပ်မကျအောင် ပဲဈေးမာအောင် အခြေအနေပေးနေတာမို့ လတ်တလော အိန္ဒိယပဲ ဈေးကွက်မှာလည်း ပဲဈေးအကျဘက် မဆင်းတော့ဘဲ ဈေးတန့် နေတာ တွေ့နေရပါတယ်။ မိုးနောက်ကျလို့ ငွေပိုရတဲ့ အခြားသီးနံှများ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာ အိန္ဒိယမှာ မုတ်သုံမိုးက လက်ရှိကာလဟာ အရေးပါဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ မိုးလေဝသဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့အထိ မိုးရွာသွန်းမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပုံမှန်အောက် ၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကာနာတာကာမှာ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့အထိ မိုးပဲ မျိုးစုံ စိုက်ပျိုးမှုဟာ မနှစ်က ဒီလိုအချိန်မှာ ဟက်တာ ၆ ဒသမ ၃၈ သိန်းစိုက်ပြီး ပြီဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ တော့ ၂ ဒသမ ၉၂ သိန်းသာ ရှိလို့ မနှစ်ကထက် ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် လျော့နည်း နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပဲအများဆုံးစိုက်တဲ့ မဟာရပ်ရှတရာနဲ့ မဒ္ဒရာပရာဒေ့ရှ် တို့မှာ မိုးပြန်လည်ရွာသွန်းလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ မိုးနောက်ကျလို့ အခြားငွေပိုရတဲ့ ပြောင်းလိုသီးနံှတွေကို ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာကြလို့ ပဲစိုက် ဧရိယာ လျော့ကျမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေဟာ ဇူလိုင်လထဲမှာ ရွာသွန်းမယ့် မိုးအပေါ် မူတည်နေတယ်လို့ မြန်မာကုန်သည်ကြီးတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မနှစ်က စိုက်ဧရိယာကိုတော့ မမီနိုင်တော့ဘူးလို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ စပ်ကူးမတ်ကူး လက်ကျန် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပဲလက်ကျန်အခြေအနေနဲ့ လာမယ့်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွင်း အရောင်းအဝယ် အခြေအနေကို ဝါရင့်ပဲကုန်သည်ကြီးများ ခန့်မှန်း ဆွေးနွေးခဲ့တာကို ဖောက်သည်ချရမယ်ဆိုရင် မတ်ပဲ လက်ကျန်အနေနဲ့ တန်ချိန် ၃ သိန်းအထက်မှာရှိပြီး ပဲစင်းငုံကတော့ တန် ၁ သိန်းခွဲလောက်နဲ့ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲတီရွှေဝါကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထွက်နေတာဖြစ်လို့ လက်ရှိအချိန် မှာ ခရမ်းသုံးခွနဲ့ အညာပေါင်း ၅ သောင်း၊ ၆ သောင်းလောက်ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိပဲ လက်ကျန် အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ် မယ်ဆိုရင် ပဲစင်းငုံပမာဏနည်းနည်းများ နေတာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ပဲတွေကတော့ အရင်နှစ်တွေ တုန်း ကလည်း ဒီလိုအချိန် ဒီပမာဏက ကျန်လေ့ကျန်ထရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပဲမျိုးစုံရဲ့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ဈေးတက်တက်ကျကျ ဒီလိုစပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ လက်ကျန်ကတော့ ကျန်စမြဲပါလို့လည်း ကုန်သည် တစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ တစ်ကျော့ပြန်ဈေးကွက် ဝင်လာတဲ့ ကုလားပဲ အလားအလာ ပဲမျိုးစုံဈေးကွက်ရဲ့ ရှေ့အလားအလာကို ဆွေးနွေးရာမှာတော့ အရင်နှစ်တွေက တင်ပို့မှုမရှိ သလောက် ကျဆင်းခဲ့တဲ့ ကုလားပဲဖြူလုံးကြီးဟာ ဒီနှစ်မှာ အခြားပဲတွေထက် ဈေးပိုရပြီး အခြေအနေ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်းအသုံးများသလို ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယက လည်းတအားဆွဲလို့ တောင်သူရော၊ ကုန်သည်တွေမှာပါ လက်ကျန်နည်းပြီး အကျိုးအမြတ်ရှိခဲ့တဲ့ ပဲပါပဲ လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ ကုလားပဲစိုက်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါတို့မှာ ရာသီဥတု အခြေ အနေအရ စိုက်ဧရိယာလျော့မယ့်သတင်းတွေအရရော လက်ရှိ ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယရဲ့ ဝယ်လိုအားတွေ အရရော လာမယ့်ကာလမှာလည်း အလားအလာရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဝယ်လို အားကောင်းတဲ့ ပဲကို ဈေးကွက်ဝင် မျိုးသန့်တွေနဲ့ တိုးခဲျ့ စိုက်ဖို့ ပဲကုန်သည်နဲ့ အထူးပြုကုမ္ပဏီကြီးများက မျိုးသန့်တွေဖြန့်ဖြူးပြီး တိုက်တွန်းအားပေးမယ်ဆိုရင် နောင်နှစ်မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ခံစားရမှာ ကျိန်းသေ ပါ။ အလားအလာကောင်းတဲ့ မတ်ပဲ ပုံမှန် ရောင်းဝယ်ဖို့တော့လို မတ်ပဲအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယဝယ်လက်တွေက လက်ရှိမှာလည်းတောက်လျောက်ဆွဲနေတယ်။ ဒီလထဲ မှာလည်း တင်ပို့မှု ကောင်းဦးမှာဖြစ်သလို သြဂုတ်လမှာလည်း မေ၊ ဇွန်လတွေလိုပဲ ပဲအရွေ့များမယ်ဆိုရင် မြန်မာမတ်ပဲအတွက် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဒေဝါလီပွဲမတိုင်မီ ၁ လအလိုမှာ demand ကြီးကြီး တစ်ခါရှိတယ်။ လက်ရှိဈေးကလည်း သင့်တင့်တဲ့ ဈေးဖြစ်နေလို့ သြဂုတ်လမှာ အိန္ဒိယအဝယ်ကြီးကြီးကို ရောင်းလိုက်ရင် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ လက်ကျန်မများနိုင်ပါဘူးလို့ ဝါရင့် ကုန်သည်တစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောင်းသင့်တဲ့အချိန်မှာ ရောင်းထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကုန်သည်ကြီးများ ဈေးဆွဲတင် ဆွဲချတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ပုံမှန်ရောင်းဝယ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်လို့ ကုန်သည်တစ်ဦးက ထောက်ပြပါတယ်။ လက်ရှိမတ်ပဲဈေးကွက်အနေအထားက ပြည်တွင်းထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်မှုနဲ့ ပြည်ပ ဝယ်လိုအားက မျှတနေတဲ့ သဘောရှိနေတဲ့အတွက် လာမယ့် ရာသီတွေမှာ ဈေးကောင်းရဖို့ အတွက်တော့ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး အရေးပါလှပါတယ်။ ပဲတီစိမ်းအရည်အသွေး ထိန်းနိုင်ရေးအတွက် ခေတ်မီစက်များ တစ်နှစ်ပတ်လုံးထွက်တဲ့ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲတီရွှေဝါဈေးကွက် ကတော့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ဘက်က ဝယ်လိုအားတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီနှစ်ပဲထွက်ချိန်မှာ မိုးမိကြလို့ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ အစတွေပါပေမဲ့ ဝယ်လက်က Quality ခွဲပြီး သူ့ဈေးနဲ့သူ ဝယ်ယူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ အရည်အသွေးညံ့နဲ့ အကောင်းအပြင် ရေစိုပဲကို ခွဲထုတ်တဲ့ စက်ကောင်းကောင်းပဲ ရှိလားမသိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်ထုတ်ဖို့ပဲ ဝယ်ယူသလားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာရမယ်လို့ ကုန်သည် တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ရေစိုမိုးမိပဲကို ဈေးတစ်မျိုးနဲ့ ဝယ်တော့တောင်သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကုန်သည်တွေ အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ပူခဲ့ရပေမဲ့ ရောင်းထွက်တယ်လို့ ကုန်သည် တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ပဲဈေး မလျော့ရအောင် အရည်အသွေး ပျက်စီးမှု နည်းပါးအောင် ရာသီဥတုကို အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး လက်ဦးမှုရယူပြီး လေလွင့်မှု နည်းအောင်လည်း ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ခေတ်မီ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပဲတင်ပို့သူများ၊ ပဲအစုအဖွဲ့၊ အထူးပြု ကုမ္ပဏီကြီးများအနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ တိုးတက်ဆောင်ရွက်ရေးကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့တော့လိုပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံက ပဲတီစိမ်းကို စိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်သုံးသလို ပိုလံျှရင်လည်း ပြည်ပ တင်ပို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေ မပေးလို့ ထွက်ရှိမှု နည်းလာတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အရည်အသွေး ကောင်း တွေကို ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ တင်သွင်းလာနေပါတယ်။ သြစတြေးလျကတော့ ပြည်တွင်းသုံးမရှိဘဲ ပြည်ပ ကိုသာ တင်ပို့တာဖြစ်လို့ ဒီလို ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့ ပဲတွေကို အရည်အသွေးမကျအောင်နဲ့ ဈေးကွက်ဝင် ဈေးကောင်းရတဲ့ ပဲတွေရွေးစိုက်ဖို့ နှိုးဆော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယရာသီပေါ် တည်မီနေတဲ့ ပဲစင်းငုံဈေးကွက် မြန်မာတောင်သူအများစုဟာ သီးနံှဈေးတက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျသည်ဖြစ်စေ သူ စိုက်ပျိုးနေကျသီးနံှကို ပုံမှန်စိုက်ပျိုး ခြင်းဟာလည်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ အားနည်းချက် တစ်ခုပါလို့ ကုန်သည်အချို့က ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယဝယ်လက်တစ်ခုထဲကို အပြည့်အဝအားထားနေရတဲ့ ပဲစင်းငုံဈေးကွက်ဟာ ဒီနှစ် အနေအထားမှာ ပြည်တွင်းမှာရော အိန္ဒိယမှာပါ လက်ကျန်တွေများလို့ ဘယ်လိုမှ မျှော်မှန်းမထားတဲ့ အောက်ဈေးကိုရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လများမှာ ဘုရင့်နောင် ပေါက်ဈေး တစ်တန်ကို ကျပ် ၇ သိန်းကျော်ရှိခဲ့ရာမှ လက်ရှိ ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာတော့ တစ်တန် ၄ သိန်း ၃ သောင်းကျော် အထိ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတွေကလည်း ဝယ်လက်တွေ ဝယ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ ပဲစင်းငုံအနီစကို အိန္ဒိယဝယ်လက်တွေ အဝယ်သွက်လာ နေပြီလို့ ကုန်သည်များကဆိုပါတယ်။ လတ်တလော သတင်းတွေအရ အိန္ဒိယမှာလည်း ပဲစင်းငုံစိုက်ဧရိယာက မနှစ်က ကာလတူထက် လျော့ကျနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိအကျ ခန့်မှန်းဖို့တော့ စောနေ သေးလို့ ဒီနှစ်ရှေ့အလားအလာ အနေနဲ့တော့ အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးမှုအပေါ် အများကြီး မူတည်နေတယ်လို့ ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အာဖရိက ရာသီဥတုနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပဲစင်းငုံကို အဓိကစားသုံးတာ အိန္ဒိယလူမျိုးပဲရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံလောက် ထုတ်လုပ်မှုမများပေမဲ့ ပဲစင်းငုံ ထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့ အာဖရိက၊ တန်ဇန်းနီးယားနဲ့ မာလာဝီတို့ကလည်း အိန္ဒိယဈေးကွက်ဝေစုပိုရဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပဲစင်းငုံ ဈေးကွက်အနေအထားက အိန္ဒိယရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ တစ်မျိုးထဲသာမက အာဖရိကရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတို့ကိုပါ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့် အနေအထားပါ။ အာဖရိကအချို့နိုင်ငံတွေမှာ ရာသီဥတုမကောင်းဘူးလို့ အချို့သတင်းတွေရပေမဲ့ သြဂုတ်လ ကုန်လောက်မှာတော့ အာဖရိကပဲစင်းငုံတွေ ဝင်လာတော့မယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူနဲ့ ကုန်သည်ကြီးများက ဈေးတွေ မတန်တဆ တင်ပြီး လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အထိနာတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ကြုံတွေ့ ရပြီးသားပါ။ အမှန်တော့ ကုန်ရောင်းသူရော ဝယ်သူပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်ကို ထည့်တွက်ပြီး ရောင်းသင့်တဲ့ အချိန်ရောင်း၊ ဝယ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ဝယ်တာတော့ အဖြစ်သင့်ဆုံးပါပဲ။ စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ပြင်ဆင် ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာ ပို့ကုန်ဝင်ငွေတစ်ယူနစ်တန်ဖိုး မတည် မငြိမ်ဖြစ်တာလည်း အချက်တစ်ချက်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသာ တည်ငြိမ်နေ မယ်ဆိုရင် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ လုပ်သာကိုင်သာ ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့ပဲမျိုးစုံဟာ နိုင်ငံစုံကိုသွား တာဖြစ်ပေမဲ့ ပမာဏကြီးကြီးမားမားသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကတော့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ပါကစ္စတန်တို့ဖြစ်လို့ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ အဲဒီနိုင်ငံ တွေရဲ့ မူဝါဒ၊ ငွေကြေးဈေးကွက် တွေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပဲအများဆုံးတင်ပို့နေရတဲ့ အိန္ဒိယ ဈေးကွက်တစ်ခုကိုပဲ မှီခိုနေရမှု လျှော့ချဖို့အတွက် အခြားဈေးကွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ လိုအပ်တဲ့ သီးနံှတွေ ကိုလည်း တိုးစိုက်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဈေးကွက်ကြီးမားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဝယ်လိုအားရှိတဲ့ ပဲတီရွှေဝါကို ပိုစိုက်သင့်သလို ပြောင်းတို့ ပဲပုပ်တို့ကိုလည်း တိုးခဲျ့ စိုက်ပျိုးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိန်ခေါ် မှုနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုသာ ပဲတင်ပို့သူ၊ အစုအဖွဲ့(Cluster)၊ အထူးပြုကုမ္ပဏီများမှ တောင်သူများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများကပါ ဝိုင်းဝန်းပြီး လက်ရှိအခြေအနေထက်ပို တိုးတက်ပြင်ဆင် ထားရင်တော့ ၂ဝ၁၁ ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွက်ရော လာမယ့်ရာသီသစ်အတွက်ပါ ပဲမျိုးစုံပို့ကုန်ဈေးကွက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို အောင်မြင်စွာနဲ့ ဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်းပါ။ ယမင်းရွှေစင်
စမစ်၊ရီကာဒို တို့နှင့်အတူ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အကဲခတ်ကြည့်ခြင်း အလုပ်ဖြစ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်နှင့် တမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတို့တွင် မကြာခဏ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးသော မိတ်ဆွေနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း တစ်ယောက်၏ အတွေ့အကြုံများကို နားထောင်ရင်း လွန်ခဲ့သောနှစ်က မိမိကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိခဲ့သည့် မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် မြင်ကွင်းကို ပြန်လည် သတိရနေမိသည်။ ဇုန်အတွင်းသို့ နံနက် ၉ နာရီခွဲရောက်ရှိ ချိန် ရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်ရသော မြင်ကွင်းမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းလှ၏။ ပျားပန်းခပ်မျှ လှုပ်ရှားနေသော ကားများ၊ ဥဒဟို သွားလာနေသော လူအများကို တွေ့နေရသည်။စိတ်ဝင်တစား ရှိလှ၍ နားနှင့်မျက်စိကို အစွမ်းကုန်ဖွင့်ကာ ဇုန်တစ်ဇုန်လုံးကို လေ့လာချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ဇုန်အတွင်း ကားများ၊ လူများ လှုပ်ရှားမှုများကို စုပေါင်းရုံးဟုခေါ်သည့် အဆောက်အအုံ အပေါ်ထပ်မြင်ကွင်းမှ မြင်တွေ့နေရသည်မှာ ဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားနေသည့် အကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုပင် ကြည့်၍ပင် ကောင်းနေတော့သည်။ ဤမြင်ကွင်းသည် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အလုပ်ဖြစ် နေသည်ကို သက်သေပြပုံရိပ်ဖြစ်၏။ သီအိုရီဟောင်းနှင့် အခြေခံကုန်သွယ်မှုအိုင်ဒီယာ ကျမ်းရိုးဘောဂဗေဒပညာရှင်ဟု သမုတ်ထား သည့် အဒမ်စမစ်က ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပကတိအကိုျးကျေးဇူး(Absolute Advantage) သီအိုရီကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ဖူးသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည် အနေဖြင့် အခြားတိုင်းပြည်များထက် ပို၍ စရိတ်သက်သာသော ကုန်စည်များကို ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချခြင်းအားဖြင့် ပကတိအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းမှုများ ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ယခုခေတ် အခြေအနေနှင့်ကြည့်လျှင် အလွန်ရိုးစင်းသော အယူအဆပင်။ အကြံတူနောက်လူသာစမြဲ ဆိုသည့် စကားအတိုင်း ဒေးဗစ်ရီကာဒိုက နှိုင်းယှဉ် အကျိုးကျေးဇူးကို ထပ်မံဖန်တီးသည်။ စမစ်အနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပကတိအကျိုးကျေးဇူးမရှိ သည့် ကုန်စည်များဖြင့် နိုင်ငံများရှိနေသည်ကို သတိမမူခဲ့ဟု ရီကာဒိုက ထောက်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကုန်စည်များ အားလုံးတွင် ပကတိ အကျိုးကျေးဇူးမရှိသည့်တိုင် နှိုင်းယှဉ် အကျိုးကျေးဇူးများ(Comparative advantage) ရှိနိုင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိသည့် ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ပါက ကုန်သွယ်ခြင်း ဖြင့် အကိုျးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ စမစ်နှင့်ရီကာဒိုနှစ်ဦးကဲ့သို့ ကုန်စည်များအပေါ် အာရုံမစိုက်ဘဲ သွင်းအားစု သယံဇာတများပေါ် တွင်အလေးပေးလေ့လာခဲ့သည့် ဆွီဒင်ဘောဂဗေဒ ပညာရှင် နှစ်ဦးတို့ကြောင့် အက်ရှာအိုးလင်း (Heckscher-Ohlin) သီအိုရီ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန် သည်။ စွမ်းအားစုပိုင်ဆိုင်မှု အချိုးကွာခြားသော တိုင်းပြည် နှစ်ပြည်တို့သည် မိမိနိုင်ငံတွင်ပေါများ စွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် စွမ်းအားစုသုံး ကုန်စည်များ ကိုထုတ်၍ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်လျှင် နှစ်ဖက်အကျိုး ရှိနိုင်မည်ဟု ထပ်မံဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ယခုတင်ပြမှုသည် ကုန်သွယ်မှုသီအိုရီများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သိစေလို၍မဟုတ်။ ယနေ့ ၂၁ ရာစု ကမ္ဘာ့အခြေအနေသည်လည်း ၁၉ ရာစု၊၂ဝ ရာစု သီအိုရီများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျ သိပ်မဖြစ်တော့ပေ။ အသစ်အသစ်သောအိုင်ဒီယာများ၊အယူအဆ များစွာ အဆက်မပြတ် ပေါ်ထွက်နေသည်။ယနေ့ ကာလတွင် ဈေးနှုန်း၊ စရိတ်၊ စွမ်းအားစုစသဖြင့် သမားရိုးကျစဉ်းစားခန်းများထက် တီထွင်ကြံဆမှု ပိုင်း၊ နည်းပညာပိုင်းတို့ကို ပိုမိုအလေးထားလာကြသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အသုံးဝင်မှုနောက်သို့ တစိုက်မတ်မတ် လိုက်နေသည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်အလုံးစုံတွင် နည်းပညာအသုံး ပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖန်တီး နိုင်ရေးကိုသာ ဦးတည်နေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆို စေကာမူ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းသည် ဒေါင်လိုက် ဖြစ်စေ၊ အလျားလိုက်ဖြစ်စေ နှိုင်းယှဉ်မှုသဘော ဖြင့်သာ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းနေ သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မရိုးနိုင်သော သီအိုရီနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသတွင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး အလွန်ထွန်းကား၏။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သော စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ၊ ရေထွက် ကုန်များအပါအဝင် အခြားသော ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ ကို တရုတ်နိုင်ငံမှကုန်သည်များက လာရောက်ဝယ် ယူနေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ကုန်သည်များ ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံထုတ် လူ့အသုံးအဆောင် များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းမျိုးစုံကို အပြန်အလှန်ဝယ်ယူနေကြသည်။ သေချာသည်မှာ မိမိနိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုဈေးသက်သာသော၊ ပိုမိုအသုံးဝင် အသုံးတည့်သော၊ ပို၍အရည်အသွေး ကောင်းသော စ သည်ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ နှိုင်းယှဉ်ပြီးသော အိုင်ဒီယာတို့ဖြင့် ရရှိလာသည့် ကုန်စည် များကိုသာ အရောင်းအဝယ် လုပ်နေ ကြခြင်းဖြစ်သည် ဆို သည့် အချက်ဖြစ် သည်။ စီးပွားရေး တဖြည်းဖြည်း ဖွံ့ဖြိုး လာနေပြီး ကမ္ဘာ့ဒုတိယ အကြီး ဆုံး စီးပွားရေး အဆောက်အအုံ အနေ ဖြင့် ရပ်တည်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဝင်ငွေ မညီ မျှမှုသည် ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ် နေသည့် ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားနေသော်လည်း လယ်ယာ ကဏ္ဍကို မှီခိုနေရသည့် လုပ်သား ဦးရေ မှာလည်းများစွာ ကျန်ရှိနေသေးသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ရေမြေသဘာဝ သယံဇာတ ပိုင်ဆိုင်မှု ကွာခြားမှုမရှိလှသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ် ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့် ရေထွက်ကဏ္ဍ ထုတ်ကုန်များကိုသာ အဓိက အား ပြုနေရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကာလရှည် အခြေအနေများကို သတိပြု ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပေသည်။ လက်ရှိမြန်မာ့ပို့ကုန်များသည် တရုတ်နိုင်ငံထက် နှိုင်းယှဉ်အကျိုးကျေးဇူး ပိုမိုရှိနေ သည့် ကုန်စည်များဖြစ်ကြ၏။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်စည်များထက် ပို၍ဈေးသက်သာကာ အရည် အသွေးကောင်း၏။ နောင်တစ်ချိန်တွင် ထို ကုန်စည်များသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်း၌ ပိုမိုပေါ များကာ ဈေးသက်သာလာပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်နေပါက မြန်မာ့ပို့ကုန် ဈေးကွက် ပျက် စီးသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဤအချက်ကို အလေး အနက်ထား ဆွေးနွေးကြရန်လိုသည်။ ကုန်သွယ် ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီများမည်မျှပင် ပေါ် ထွက်လာနေသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏နောက်တွင် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း သဘောတရား အမြဲတမ်း ကပ် လျက်ပါနေမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများဖြစ်သော အိန္ဒိယ၊ တရုတ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရေခံမြေခံ သဘာဝသယံဇာတပိုင်ဆိုင်မှု တူညီကာ မြန်မာ နိုင်ငံထက် လုပ်သားအင်အားပိုမိုသော၊ နည်းပညာ ပိုင်း သာလွန်သော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး ပို့ကုန်များနှိုင်းယှဉ်အကျိုး ဆက်လက် ရရှိ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် မိမိ တို့၏ ပို့ကုန်အခြေအနေမှန်များကို လေ့လာကာ ပံ့ပိုးရမည့်ကိစ္စများ၊ လိုအပ်ချက်များကို သုံးသပ် အဖြေရှာ၍ နှိုင်းယှဉ်တတ်သော မျက်လုံးများဖြင့် မျက်စိတစ်ဆုံး ကြည့်လျက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုနေပြီဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီကို ချင့ ်ချိန်စွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း ဘဏ္ဍာရေးအီကွစ်လိုက်ဇာ မေခရိုစီးပွားရေး ပေါ်လစီတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီ (Fiscal Policy) သည် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ စီးပွားရေး နိုးထနိုင်စွမ်းအတွက် လွန်စွာအရေးပါသည်။ ထို့အပြင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုလည်း ထိန်းကျောင်းပေး နိုင်သည်။ ပေါ်လစီတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ်ပိုင်းနှင့် အစိုးရ ရငွေပိုင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ အစိုးရ ရငွေ ပိုင်းတွင် အခွန်သည် အဓိကဇာစ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အသုံး စရိတ်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စသည် ဖြင့် အစိုးရတာဝန်ယူထားသော နယ်ပယ်အားလုံး အတွက် ဖြည့်ဆည်းမှု ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး အကံျုးဝင်သည်။ အစိုးရတစ်ရပ်သည် ဘဏ္ဍာရေး ပေါ်လစီကိုကိုင်တွယ်အသုံးပြုရာတွင် ၎င်း၏ ရငွေ နှင့် အသုံးစရိတ်တို့ကို အတိုးအလျော့ညှိ၍ ဘတ် ဂျက်ကို ချိန်ဆကြသည်။ ချင့်ချိန်မှုစွမ်းရည် ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီတွင် နှစ်မျိုးရှိသည်။ လေးလံထုံထိုင်းနေသော စီးပွားရေး အဆောက်အအုံကို သွက်လက်လျင်မြန်စေရန် ပံ့ပိုးပေးရ သည့် ပေါ်လစီတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ တိုးခဲျ့ သုံးစွဲရခြင်း၊ အစိုးရငွေတွင် အဓိကဖြစ်သည့် အခွန် အကောက်များကို လျှော့ချရခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤသို့ ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို အခဲျ့ဘဏ္ဍာ ရေး ပေါ်လစီ (Expansionary Fiscal Policy) ကို သုံးခြင်းဟုဆိုသည်။ အလွန်အမင်း အရှိန်ပြင်းစွာ ဖွံ့ထွားလာသော စီးပွားရေးကို အရှိန်မလွန် စေရန် ထိန်းကျောင်းရာတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ လျှော့ချရခြင်း၊ အခွန်ကောက်များ တိုးမြှင့် ရခြင်း ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ ဤအခြေအနေကိုမူ အကံျု့ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီ (ContractionaryFiscal Policy) ဟု ခေါ်သည်။ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး၏ အခြေအနေကိုကြည့် ကာ ထိန်းညှိရခြင်းဖြစ်၍ ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီကိုကိုင်တွယ်ရာတွင် မက်ခရိုစီးပွားရေး အချက် အလက်များကို ဘက်စုံထောင့်စုံလေ့လာနိုင်မှသာ ပိုမိုထိရောက်နိုင်ပေသည်။ ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီ၏ အဓိကရည်ရွယ် ချက်မှာ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံအတွင်း စီးပွား ရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဟန်ချက်ညီပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုး တက်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤပေါ်လစီကို အသုံးပြုတိုင်း မျှော်မှန်းချက်ကို အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံအတွင်းရှိအခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် ပေါ်လစီကိုင်တွယ် အသုံးပြုသူတို့၏ ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းကို စိန်ခေါ်လျက် ရှိသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောအဖွင့်ဝါဒ တံခါးပိတ်ဝါဒ ကျင့်သုံးသော စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် အခွန်အကောက်ကို နှိမ့်၍ အစိုးရအသုံးစရိတ်ကို တိုးမြှင့်သုံးစွဲပါက ကနဦး၌ စုစုပေါင်း ဝယ်လိုအား မြင့်မားလာပြီး ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာသည်။ သို့သော် ကာလရှည်တွင်ဘတ်ဂျက်လိုငွေနှင့်အစိုးရချေးငွေ ပမာဏ မြင့် တက်လာနိုင်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် အတိုးနှုန်းများ ပါ မြင့်တက်လာကာ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ ထိခိုက်လာနိုင်သည်။ ရေရှည်တွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်းကို ပြန်လည်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ နိုင်ငံ တကာနှင့်အဆက်အစပ်ရှိသော တံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးသည့် စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ တွင်မူ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုသည် နိုင်ငံတွင်းသို့ ပြင်ပအရင်းအနှီးစီးဝင်လာမှု မြင့်မားလာစေနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်း မြင့်မားမှုကိုလည်း ပြန်လည်ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုများ အပေါ်ထိခိုက်မှုများလည်း လျော့နည်းလာနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခြင်း အန္တရာယ်ကိုပါ လျော့ နည်းသွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘဏ္ဍာရေး ပေါ်လစီအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုး သက်ရောက်မှုများတွင် စီးပွားရေး အဆောက် အအုံ၏ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်စပ်မှုအခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍ ကွာခြားမှုရှိသည်။ တံခါးပိတ်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံထက် နိုင်ငံ တကာသို့ စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ထားသောနိုင်ငံများ တွင် ပိုမိုထိ ရောက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ နိုင်ငံများဟာ မိမိနိုင်ငံရဲ့ ပို့ကုန်တွေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ထဲကို တိုးခဲျ့ တင်ပို့နိုင်စေဖို့ ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှုတွေ၊ နှစ်နိုင်ငံချင်း ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီစာခုျပ်တွေ (Bilateral Agreement)၊ နိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီတဲ့ စာချုပ်တွေ (Bilateral Agreement) စတာတွေ ချုပ်ဆိုခြင်းတို့နဲ့အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုမှာ ပါဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်း ဆိုင်ရာမှာလည်း ပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ •အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုမှာ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ ဘာတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ။ မိမိနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုမှာ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖု့ိအတွက် အစိုးရဘက်က ဘာတွေဘယ်လို ချောမွေ့အောင် လုပ်ဆောင် ပေးမှာလဲ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစုအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ ဘာတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ဆိုတာ အဓိက တွေးရမဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်မှာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံ အဆောက်အဦပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သွင်းကုန်ပို့ကုန် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင့်တော်သော အခွန်အကောက်နှုန်းထား၊ ငွေ လဲလှယ်မှုနှုန်း စသည်ဖြင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရဘက်က မူဝါဒနဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ လွယ်ကူချော မွေ့စေဖို့ ကုန်သွယ်မှုကို ဖန်တီးပံ့ပိုးနိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် (International Business Environment)ကို သိရှိနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မိသားစု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Family Business) ကနေ တကယ့် ကုန်သွယ်မှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (Commercial Business) အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းနိုင်ရပါမယ်။ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု (Management) ၊ ဈေးကွက် ရှာဖွေမှု (Marketing)၊ နည်းပညာအသုံးချမှု (Utilization of Technology) ၊ ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေမှု (Financing)၊ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှု (Product Design and Packaging) ၊ အင်္ဂလိပ် စကားပြော ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးချမှု၊ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဥပဒေစတဲ့ ဧရိယာတွေမှာ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် မိမိ ဝန်ထမ်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို လူသားရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ပြင်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ ကောင်းမွန်လာခြင်းစတဲ့ Globalization ရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကို အသုံးချတတ်ရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးထုတ်လုပ်နေတဲ့ စံချိန်စံညွှန်း (Standard) တွေ သိရှိနားလည်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (International Business Rules and Regulations) နဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ ( International Business Ethics) ကိုလည်း သိရှိလိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင်ရပါမယ်။ နိုင်ငံအနံှ့အပြားမှာ ဈေးကွက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ စီးပွားရေးစနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာပြီး စီးပွားရေးတံခါးတွေ ဖွင့်ထား ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပကို ရှေ့ရှုတဲ့မဟာဗျူဟာ ( Outward oriented strategy) ကို ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဈေးကွက်တွေ ကျယ်ပြန့်လာမှု၊ စီးပွားရေးလွပ်လပ်ခွင့်များ ရှိလာခြင်းတို့ကြောင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုမှာ ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု ( Merchandise Trade) သာမက ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်မှု (Services Trade)ပါ တိုးတက် လာခဲ့တယ်။ • မိမိနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေလဲ။ မိမိနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်း တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ့်စတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။ အခြေအနေတွေပေးရင် ပေးသလို အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအာရှနဲ့ အာဖရိကအထိ ဈေးကွက်တွေ တိုးခဲျ့ နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိတင်ပို့နေတဲ့ အဓိက ကုန်စည်တွေကတော့ ဆန်၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပြောင်း၊ရော်ဘာ၊ ဝါ၊ ဂုံလျှော်စတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များနဲ့ ငါး၊ ပုစွန်အစရှိတဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်း၊ သစ်နဲ့သစ်အချောထည် ပစ္စည်း၊ အဝတ်အထည်စတာတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီဈေးကွက်တွေက ဘာတွေကြိုက်ပြီး မိမိကဈေးကွက်ကို ဘယ်လောက် စိုးမိုးနိုင်လဲ၊ စိုမိုးနိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ။ မိမိနဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေလဲ။ မိမိပြိုင်ဖက်အကြောင်းကို မိမိသိပါ။ ( Know your competitors.) မိမိတို့နိုင်ငံက တင်သွင်းနေရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ အဝတ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စက်ပစ္စည်း၊ စားသုံးဆီနဲ့ စက်သုံးဆီတို့ဖြစ်တယ်။ • မိမိတို့ဟာ အခြားဘယ်နိုင်ငံနဲ့ ဘယ်ထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ အခွင့်သာနိုင်မလဲ။ နှိုင်းယှဉ်အကျိုးကျေးဇူး ဘာတွေရှိနိုင်မလဲ စဉ်းစားပါ။ ဈေးကွက်တွေကိုကြည့်ရင် ဘယ်နိုင်ငံတွေကဘာတွေလိုအပ်နေသလဲ။ ဘာတွေတင်သွင်းနေရသလဲ။ သူတို့ တင်သွင်း တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး မိမိတို့မထုတ်နိုင်ဘူးလား။သူတို့ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက် (Standard) တွေက ဘာတွေလဲ။ ဘယ်လို ဒီဇိုင်း ( Design) ၊ ဘယ်လို ထုပ်ပိုးမှုစနစ် ( Packaging System) မျိုးတွေမှ သဘောကျတာလဲ။ စတဲ့စားသုံးသူအကြိုက် ( Customer’s taste) ကို စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောင်းပြန် ပြန်စဉ်းစားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆီက ဘာထုတ်ကုန်တွေ ထွက်ရှိနေသလဲ။ အဲဒီထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်လို လူမျိုးတွေက ကြိုက်တတ်မလဲ။ ကြီး ကြီးကျယ်ကျယ် မစဉ်းစားရင်နေပါ။ လက်ရှိ ထုတ်ကုန်ကိုပဲ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကြိုက်တတ်အောင် ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲပေါ့။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်နဲ့ကိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖောက်သည်တွေ ရဲ့စရိုက် Character ကို ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စာရေးသူရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ဥပမာပေးပါရစေ။ စာရေးသူ အိန္ဒိယမှာ ပါရဂူသင်တန်းသွားတက်စဉ်က တက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လာတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ရှိတဲ့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစားအစာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော(International Food and Cultural Festival) လုပ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှသာ မိမိနိုင်ငံအလံကို လွှင့်ထူခွင့်ရပါတယ်။ စာရေးသူကလည်း သူများ နည်းတူ အားကျမခံ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုပြီး မြန်မာ အလံလွှင့်တင်ခွင့် ရဖို့အရေး (Myanmar Food Stall)တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရ အယောက် ၁ဝဝ စာ ချက်ပြီး မန္တလေးကြာဇံချက် (Vermicelli Soup) နဲ့ လက်ဖက် သုပ်(Pickled tea leaf salad) နဲ့ ပါဝင်ဆင်နွဲှ ရောင်းချပါတယ်။ မြတ်ဖို့ မဟုတ်ပါ။ (ရှုံှုးနိုင်တယ်လို့လည်းဖ မျှော်လင့်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။) အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီပွဲမှာ ပါဝင်မှု (Participation) လုပ်ချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အစားအစာ ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာရယ်၊ အခြား လူမျိုးတွေသိအောင် Marketing လုပ်တာပါ။ နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေရဲ့ Taste အရ ကြာဇံချက် မကြိုက်ဘူး။ တရုတ်၊ ဂျပန်နဲ့ ဗီယက်နမ်တွေက ကြာဇံချက် ကြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆိုတာ မသိ၊ မရင်းနှီးတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ စာရေးသူကတော့ ကူပွန်မဝယ်ရင်နေပါစေ။ နိဗ္ဗာန်ဈေးလို သဘောထားပြီး လက်ဖက်သုပ်တွေ ပန်းကန်အကြီးစား နဲ့ သုပ်ပြီး တစ်ခါသုံး ပန်းကန်၊ ဇွန်းလေးတွေနဲ့ ချထားပေးပါတယ်။Festival ကို လာတဲ့သူတွေက စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေက အရင်ဆုံး ဆိုင်ခန်းတွေရဲ့ အခင်းအကျင်း၊ နမူနာပြထားတဲ့ အစားအသောက်ကို ကြည့်ပြီးမှ ဝယ်ယူ စားသုံးကြပါ တယ်။ ဒီတော့ စာရေးသူကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ရှိစုမဲ့စုသော မြန်မာ့လက်မှု ရွှေခြည်ထိုးကားလေးတွေ၊ ကချင်လွယ်အိတ်၊ နိုင်ငံအလံ စတာလေးတွေနဲ့ ကိုယ့် Stall ကို လှပအောင်၊ ဆိုင်ခန်းအား ဆွဲဆောင်မှု ရှိအောင် ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ နောက်အခြားတက္ကသိုလ်က မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပြီး မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ တက်ပေးဖို့ request လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ ပရိသတ်ကို ဒီအစားအသောက် အကြောင်းကို ရှင်းပြကြပါတယ်။ ကြုံတုန်းလေး ပြောပြရရင် ဧည့်ခံ အကောင်းဆုံးဆု ( Best Hospitality Prize)၊ဆိုင်ခန်းပြင်ဆင်မှု အကောင်း ဆုံးဆု (Best Decoration Prize) ၊ အကောင်း ဆုံး အစားအသောက်ဆု ( Best Food Prize) အစရှိသဖြင့် ဆုသုံးဆုပေးတဲ့အခါမှာ စာရေးသူတို့ Myanmar Stall က ဧည့်ခံအကောင်းဆုံးဆု (Best Hospitality Prize) ရခဲ့ပါတယ်။ Best Hospitality Prize ရခဲ့ခြင်းကတော့ အလကား အမြည်းကျွေးတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ မရှိပါဘူး၊ နောက်ရိုးရာဝတ်စုံ ဝတ်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မရှိသလို ဘယ်လို ချက်တာလဲ၊ ဘာတွေ ထည့်ချက် တာလဲလို့ မေးရင်လဲ ရှင်းပြပေးတဲ့ မိမိ ရောင်းချတဲ့ အစားအစာ ဥပမာ-Pickled tea leaf အကြောင်းကို စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရှင်းပြ တာမျိုး ဘယ် Stall မှာမှ မရှိပါဘူး၊ မြန်မာလူမျိုးရဲ့ စရိုက်ကို ပြလိုက်နိုင်ခဲ့လို့ အဲဒီဆုရခဲ့တာဖြစ်ပါမယ်။ ပထမဦးဆုံးနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Stall ကို လာတဲ့နေရာမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေက လက်ဖက်သုပ် ကြိုက်ပါတယ်။ သူတို့လည်း လက်ဖက်ပင် စိုက်ပျိုးတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ဒါဂျီလင် လက်ဖက်ခြောက်ဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဒီလို Tea leaf ကိုနှပ်ပြီး စားသုံးရမှန်း မသိဘူး။ “ We have no idea” လို့ ပြောပြပါတယ်။ နောက်နှစ်ပြိုင်ပွဲကျတော့ ကျွန်မ Strategy ပြောင်းလိုက်ပါပြီ။ အမှတ်ပေး အကဲဖြတ်တဲ့သူတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ပါမောက္ခတွေဖြစ်လို့ ကျွန်မ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ချက်ပြီး ဝင်ပြိုင် ပါတယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ( Southern India) ဟာ ပင်လယ် ကမ်းခြေ ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက် အုန်းသီးနဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ အစား အသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Best Food ဆုကို ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေ ကြရင် မြန်မာအစား အသောက်ကို သိနေပြီ။ ဒီလိုဆုရရှိခဲ့ခြင်းက Marketing စာတွေထဲမှာ ပါသလို Know your customer. ( မိမိ ဖောက်သည်အကြောင်း မိမိ သိပါ) ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဈေးကွက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့တတွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အစားအသောက်တွေကို အခြားနိုင်ငံခြားသားတွေ စားတတ်၊ သုံးတတ် အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ မလိုဘူးလား။ ဒီလိုပဲ ဈေးကွက်ထဲကို ထိုးဖောက် ရမှာပဲပေါ့။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ အနစ်နာခံရမှာပေါ့။ စာရေးသူ တို့နိုင်ငံမှာ ပီဇာ၊ ဟော့ဒေါ့၊ ဟော့ပေါ့၊ ဆူရှီ ၊ ကြေးအိုး၊ ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲနဲ့ ကင်မ်ချီ စတာတွေကို စားသုံးတတ်နေသလို မြန်မာအစားအစာကိုလည်း ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်သင့်တာပေါ့။ ကမ္ဘာအထိမစဉ်းစားချင်နေပါ၊ စာရေးသူတို့နဲ့ကပ်လျက်ရှိနေတဲ့ လူဦးရေ အများဆုံးနှစ်နိုင်ငံ (တရုတ်၊ အိန္ဒိယ)နဲ့ အိမ်နီးချင်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံကျော်က ကျွန်မတို့ နိုင်ငံဘေးမှာ ရှိနေတယ်။ လူလတ်တန်းစားများလာပြီး ဝယ်နိုင်စွမ်း (Purchasing Power) ရှိတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေကို ချဉ်းကပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးတတ်ရင် အခွင့်အရေး (Opportunity) ဖြစ်ပြီး မသုံးတတ်ရင် ခြိမ်းခြောက်မှု (Threat) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အကြောင်းပြောပြီးတဲ့နောက် မိမိထုတ်ကုန်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အချိန်မီရောက်ရှိအောင်ပို့နိုင်မလဲစတဲ့ ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (Logistics)ဟာလည်း ပို့ကုန်ပို့သူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ထည့်သွင်း စဉ်းစားမှုတစ်ရပ် ဖြစ် ကြောင်းကို ဆွေးနွေးပါမယ်။ ယိုးဒယားလို သစ်ခွပန်း ပန်းလှလှတွေပို့မှာလား၊ တရုတ်နိုင်ငံလို လီလီပန်းလှလှတွေ ၊ သစ်သီးတွေပို့မှာလား၊ သြစတြေးလျလို ပန်းသီး တွေ၊ စပျစ်သီးတွေ ပို့မှာလား၊ ဂျပန်က စင်ကာပူကို မုံလာဥနီတွေ ပို့သလို ပို့မှာ လား၊ အအေးခန်း ကွန်တိန်နာတွေ၊ အမြန်သင်္ဘောတွေရှိတဲ့ခေတ်မှာများများ ပို့ဖို့ တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကွန်တိန်နာ သင်္ဘောတွေက ကိုက်မှ ပြေးဆွဲနိုင်မှာပေါ့။ ပန်းတွေကို လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ပို့ကြတယ်။ လာအိုက နံနက် ၆ နာရီကနေ ပို့တဲ့ ပန်းတွေကဂျပန်မှာ ၁ဝ နာရီလောက်ဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ပြီး ရောင်းနေပြီ။ ထောက်ပံ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (Logistics) နဲ့ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု ( Supply Chain) တွေ ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တွေမှာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဓာတုဗေဒဆေး ပါတာမျိုး၊ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတ်မြေ သြဇာ အစရှိတဲ့ အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြည့်မီဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က စင်္ကာပူ ရောက်တုန်း ခရီးသွားဟန်လွဲနဲ့ Channel News Asia line မှာ ကြည့်ရင်း မြန်မာသနပ်ခါးအကြောင်းကို ရှင်းပြ၊ ပြောပြနေတာတွေ့တော့ စာရေးသူ တော်တော်လေး ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ လူတော်တော်များများ သိသွားရင်တော့ ဒါလဲ အလားအလာရှိတဲ့ ပို့ကုန်တစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုဈေးကွက်တွေထဲမှာ လူဖန်တီးတာ (Artificial) ထက် သဘာဝ (Natural) ကို ဦးစားပေးလာကြတယ်။ သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖုနဲ့လုပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ခေတ်စားလာပြီး သဘာဝတရား ကို ပြန်လည်မြတ်နိုး တန်ဖိုးထား တတ်လာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်နဲ့လုပ်တာ(Machine made) ထက် လက်နဲ့လုပ်တဲ့ ( Hand Made) ကို ဦးစားပေးလာကြတာ တွေကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ စာရေးသူငယ်ငယ်တုန်းက မုံရွာမြို့မှာနေစဉ်အခါက တမူး၊ မိုးရေးကနေ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကဇီးထုပ်တွေ အိန္ဒိယဘက်ကို တင်ပို့တာတွေ့ဖူး၊ မြင်ဖူးပါတယ်။ အိန္ဒိယ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့သူတွေက ဇီးယိုကို ရေနွေးနည်းနည်းနဲ့ ထည့်ဖျော်ပြီး ဇီးဟင်းချိုလုပ်သောက်တယ်။ ထမင်းနဲ့ စားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာပဲ တင်ပို့ပါစေ မိမိတင်ပို့ချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မယ့် ဈေးကွက်ရဲ့ အခြင်းအရာ၊ လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေနဲ့ ညီညွတ်အောင် စဉ်းစားဖို့ ထုတ်ကုန်ကို ခွဲခြားထုတ်လုပ် ( Product differentiation) ပေးရပါမယ်။ စားသုံးသူတွေက အကြိုက်မတူတဲ့အတွက် ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းမှာ တောင် ထုတ်ကုန်ကို ခွဲခြားထုတ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - အိန္ဒိယမှာ ပီဇာထဲကို မဆလာထည့်စားတယ်။ တရုတ်စတိုင် ကြော်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ထဲကို မဆလာ ထည့်စားတယ်။ Indianization ပေါ့။ ဒီလိုပဲ ဂျပန်နိုင်ငံက ကားတွေကို တင်ပို့ရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အလိုက် ဝင်ငွေ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုရင် ကားအသစ်စက်စက်တွေ ကိုပို့ပြီး၊ ဝင်ငွေနိမ့်ကျတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုရင် သုံးပြီးသား ကားကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ( Reconditioned or Used Car) များကို တင်ပို့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင် အဖြူရောင်တွေ ပို့တာများတယ်။ အိန္ဒိယဘက်မှာဆိုရင် အရောင်တောက်တောက်နဲ့ ကားတွေ တင်ပို့တာများပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ခုကို ကားပို့ချင်ပြီဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ လမ်းစည်းကမ်း (Traffic Rule) က ဘယ်လိုလဲ။ လမ်းကို ညာဘက်ကပ်မောင်းတဲ့နိုင်ငံလား၊ ဘယ်ဘက် ကပ်မောင်းတဲ့ နိုင်ငံလား၊ လမ်းကို ဘယ်ဘက် ကပ်မောင်းတဲ့ နိုင်ငံဆိုရင်ကားရဲ့ Steering က ညာဘက်မှာ ရှိရမယ်။ လမ်းကို ညာဘက်ကပ်မောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုရင် ကားရဲ့ Steering က ဘယ်ဘက်မှာ ရှိရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ Traffic Rule ကို လေ့လာရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မိမိတင်ပို့မယ့် နိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုစည်းရပါမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ သတင်းအချက်အလက်ဆိုတာ ငွေ ( Information is money) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အသင်းအချက်အလက်များ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲလာခြင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲလာခြင်းကိုလည်း ကောင်းစွာသတိပြုမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ အသိပညာရှိလာတဲ့လူတွေဟာ သဘာဝကို ဦးစားပေးလာကြပြီ ( Back to the Nature) ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များအရ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ( Chemicals) ပါဝင်သော အစားအစာ၊ အသုံးအဆောင်များသည် အန္တရာယ်ဖြစ် စေတတ် ခြင်းကြောင့် သဘာဝအရ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုသာ ဦးစားပေး အသုံးပြုလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- သြဂဲနစ် အသီးအနံှများကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်စားလာတတ်ကြသလို သဘာဝနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆေး၊ အလှပြင် ပစ္စည်းများကိုသာ အလေးပေးပြီး သုံးစွဲလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်း စေပြီး စွမ်းအင် သုံးစွဲမှုကို အနည်းဆုံး (Minimum Energy Consumption) ဖြစ်ပေါ်စေသော ထုတ်လုပ်မှု သဘောတရားကို သုံးပြီးတော့လည်း ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းအပေါ် ဆွဲဆောင်မှု ( Attraction) ယူလာကြ သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိလာရပြန် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ Corporation များသည် အမြတ်အတွက်သာ ဦး တည်လှုပ်ရှားခြင်း(Profit Motive) နဲ့သာမက လူ့အဖွဲ့အစည်း (Society) ကိုလည်း တန်ဖိုးထားရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း (မိမိတို့ ဖောက်သည်များ) တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်သာ စီးပွား ရေးဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း ကောင်းမွန် တိုးတက်စေရန် စေတနာထားပြီး ထုတ်ကုန်များကို ရွေးခြယ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုနှင့် စွမ်းအင် အသုံး ပြုရာတွင် ချွေတာမှုဖြစ် စေသော (Environmental Friendly Technologies and Energy Saving Technologies) များတီထွင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ မိမိတို့ရရှိသည့်အမြတ်ထဲမှ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများမှာ ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း၊ မိမိလုပ်သားများ လူမှုရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှု (Sustainable Development) အတွက် အလေး ထားဆောင်ရွက်ခြင်း စတာတွေကို ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေဟာ ခိုင်မာတဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိစေဖို့ လူမှုရေး လုပ်ဆောင်ချက် (Social Activities) တွေနဲ့ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေမှာ အမြတ်ရဲ့ အချို့ သော ရာခိုင်နှုန်းကို လှူဒါန်းဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ အပြန် အလှန်အကျိုးပြုနေကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ သဘောတရားကို Corporate Social Contribution-CSC (သို့မဟုတ်) Corporate Social Responsibility-CSR လို့ စီမံခန့် ခွဲမှု ဘာသာရပ်မှာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာကြတယ်။ ဒီသဘောတရားကြောင့်သာ အရင်းရှင်စနစ် ရေရှည် တည်မြဲနေရခြင်း ဖြစ်တယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်ကိုရောက်ရှိချင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ (က) ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ အဘယ့်ကြောင့် တွေးခေါ်ဖို့ လိုအပ်သလဲ။(Why do we think globally?)(ခ) ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေကို ဘာကြောင့် သိသင့်တာလဲ။ (Why do we know about global strategy?)(ဂ) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ တက်လှမ်းရန် နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။ (What are the ways thatacompany can do to go global?)(ဃ) ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာရှိနေတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။ (What are some of the challenges of going global?) ဆိုတာတွေကို စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ (အထူးသဖြင့် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ)ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရာမှာ ပါဝင်လာနိုင်အောင် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ Five I's ကို ဂရုစိုက်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေကတော့- - ပြည်တွင်းတွင် အောင်မြင်အောင် ထိုးဖောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ (Internalization )- တီထွင်မှု(Innovation) အားကောင်းစေခြင်း။- ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု (Investment)များ (ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ)မှ ရရှိစေခြင်း။- ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ (Integration)- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့ ဦးတည်ခြင်း (Internationalization) တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ Five I's ကို မေခရိုအဆင့် (အစိုးရဘက်မှ မိမိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး ခြုံ၍သော်လည်းကောင်း)၊ မိုက်ခရိုအဆင့် (စီးပွားရေး လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ တစ်ခုချင်းသော်လည်းကောင်း) စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများတွင် မိမိတို့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍမှာ မဏ္ဍိုင်လေးရပ်(Four Financial Pillars)ကို ထည့် သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။ အမြတ်ရရှိမှု(Profitability)၊ပေးရန်ရှိ သည်များအားပေးဆပ်နိုင်မှု(Solvency)၊ ငွေရလွယ်မှု (Liquidity)၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝမှု (Efficiency) နှင့် ထိရောက်မှု (Effectiveness) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ PSLEEလို့ အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ် နိုင်ပါတယ်။ Five I's နဲ့ PSLEE တို့ဟာလည်း အပြန်အလှန် ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ အမြတ်ပိုမိုရရှိချင်ရင် မိမိတို့လုပ်ကိုင် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုန်စည် (Product) ၊ ဖောက်သည် (Customers)၊ ဈေးကွက် (Market)နဲ့ ဝင်ငွေရရှိမှု မော်ဒယ် (Revenue Model) တို့ကို စီမံခန့်ခွဲသုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ PSLEE ၏ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ထုတ်ကုန်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ခြင်း (Diversification) ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ PSLEE အခြေအနေကို ကြည့်ရင် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အခြေအနေကို သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အမြတ်ရရှိမှုနှုန်း ((Profit Rating –PR) ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Business Model၊ ဖောက် သည်တွေရဲ့ အရည်အသွေး (Quality of Clients) ၊ ရောင်းချသူတွေရဲ့အရည်အသွေး (Quality of suppliers) ၊ လုပ်ငန်းလည် ပတ်မှုစွမ်းရည် (Efficiency of operation) ၊ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်မှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု (Ability to manage and control costs) တို့အပေါ် မူတည်တယ်။ Business plan တွေ ဟာ ကောင်းပါတယ် ဆိုပေမယ့် Over Planning ဖြစ်ခြင်းဟာ လည်း Business operation ရဲ့ အရှိန် (Speed)ကို နှေးကွေးစေတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းတွေရဲ့ Business Model ဟာ အား ကောင်းမှု (Strong) ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သလို ခိုင်မာမှု(Sound) ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည် (Value creating skill)၊တန်ဖိုးဖန်တီးနိုင်ရန်တီထွင်မှု( Innovation) တို့ဟာ အရေးပါလာတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအကြား ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု အကျိုးကျေးဇူး (Competitive Advantages) ရရှိစေနိုင်ရန်မှာ မိမိပြိုင်ဘက် လုပ်ငန်းများအပေါ် ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှု အကျိုး ကျေးဇူး (Differentiated Advantages) ကိုရရှိအောင် ထုတ်ကုန် ကွဲပြားစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်မှု (Product Differentiation)မှာ အရေးပါ လာတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအကြား ကုန်စည်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေသယ်ဆောင်ရာမှာ သိရှိနားလည်ရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (Regulatory requirement and current legislation) ၊ ပို့ကုန် သွင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ (Export/ Import procedures)၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးအစီအမံ (Logistics plan) ကောင်းရင်ကောင်းသလို လုပ်ငန်း ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအားလုံး လွယ်ကူအဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီအမံ (Logistics plan) ကောင်းမွန် အဆင်ပြေစေဖို့ဖောက်သည် (Customers) ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု (Logistics Management) ၊ ပြည်တွင်း သယံဇာတများ (Internal resources) နဲ့ နည်းပညာ(Technology) စတာတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံရှိသလိုပဲ နိုင်ငံတွင်းမှာ ထိုးဖောက်နိုင်အောင် ဦးစွာကြိုးစားကြဖို့၊ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုတွေကို ကောင်းစွာ လေ့လာပြီး သရုပ်ပြအကိုျးသက်ရောက်မှု (Demonstration effect) အရ မိမိထုတ်ကုန်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ လိုအပ် နေပါတယ်။ အခိုျ့လက်မှုကုန်စည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုန်ကြမ်းပေါများသော်လည်း လက်ရာကြမ်းနေ၍ ဈေးကွက်မဝင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အချို့မှာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ (Ideas)လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်ကို မည်သို့ ဖြည့်ဆည်းမည်နည်းကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအစိုးရ မှ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှတစ်ဆင့် Handicraft နှင့် Souvenir များတင်သွင်း၍ လက်မှုပညာကျောင်းများ၊ ယွန်းသင်တန်းကျောင်း များ၊ ယက္ကန်းကျောင်းများတွင် ပြသခြင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံထုတ် ကုန်စည် များကို ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပြသရောင်းဝယ်စေခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှလည်း အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ မိမိနိုင်ငံ၏ လက်မှုပညာ ရှင်များအား လေ့လာရေးစေလွှတ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပညာအခြေခံရှိပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် အချို့သောကုန်စည်များသည် မြင်ရုံနှင့်ပင် သရုပ်ပြ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရရှိသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်များ တိုးတက်စေရန် ပထမအဆင့်အနေနဲ့ အတုယူ လုပ်ကိုင်ခြင်း (Imitation) ကနေတစ်ဆင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း (Innovation and Creativity) အဆင့်ရောက်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှ စားသုံးသူများကလည်း မိမိနိုင်ငံရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ဦးစားပေးပြီး စားသုံးဖို့၊ မိမိနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို အားပေးဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ နိုင်ငံများဟာ ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းမှုတွေ၊ နှစ်နိုင်ငံချင်း ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီစာချုပ်တွေ (Bilateral Agreement)၊ နိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်မှုသေဘောတူစာချုပ်တွေ (Multilateral Agreement) ချုပ်ဆိုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရလဒ် ထွက်ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတိုးတက်မှု(Private Sector Development) ကတစ်ဆင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကို ဆင့်တိုးတန်ဖိုးများတဲ့ ကုန်စည်(Value Added Products) တွေ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှ သာလျင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ဦးဆောင်နေတဲ့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး မိမိနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံငွေကြေးချွေတာနိုင်အောင် သွင်းကုန်တွေကို အစား ထိုးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ (Import Substitution) ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူ ယှဉ်ပြိုင်မှုစွမ်းရည် (Competitiveness) တိုးတက်လာမှုမှတစ်ဆင့် ပို့ကုန်ဈေးကွက် (Export Market) အထိ ပို့နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ Made in Myanmar ထုတ်ကုန်များ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်မှာ ထိုး ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုမှာ အရေးပါတဲ့ ဒေါ်လာတန်ဖိုး တည်ငြိမ်အောင် ဘာတွေ လိုအပ်နေသလဲ လတ်တလော ငွေကြေးဈေးကွက်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့ဘဝ အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုအခြေခံပြီး ရှုထောင့်စုံက ဝေဖန်ပြောကြားနေကြတဲ့အသံတွေကို ကြားနေရပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ လည်း အထူးသဖြင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းပြီး ကျပ်ငွေတန်ဖိုးမြင့်လာတဲ့အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြတာတွေလည်း ရှိနေခဲ့ပါ တယ်။ တရားမဝင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေ ရှိနေသလား တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုဥပဒေနဲ့အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မြန်မာ့ရင်းနှီး မြှုပ်နံှမှုကော်မရှင် (MIC)ဆိုတာ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (MIC) ကတစ်ဆင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နံှတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်မျိုး မဟုတ်ဘဲ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အချို့နဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ အမည် ကိုခံပြီး ပြည်ပက တရားမဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေရှိနေတယ်လို့ ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေကတစ်ဆင့် တရားမဝင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကနေ ဒေါ်လာငွေ ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်လာပြီး၊ ပြည်တွင်းငွေကြေးဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာရောင်းလိုအားကို မြင့် မားစေခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံလေလံငွေတွေသွင်းရလို့ ကျပ်ငွေရှားသလား? နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံတွေကို အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ လေလံ တင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေက ဝင်ရောက်လေ လံဆွဲပြီး ဝယ်ခဲ့ကြလို့ ကျပ်သိန်းပေါင်းသိန်းချီပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာ ငွေထဲရောက်သွားလို့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျပ်ငွေရှားပြီး ဒေါ်လာတန်ဖိုး တက်ရတယ်လို့ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အသံတွေကိုလည်း ကြားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနကို မေးကြည့်တော့ ဒီအဆောက်အအုံလေလံငွေတွေကလည်း နိုင်ငံတော်ထဲကို ၅ ပုံ ၁ ပုံပဲဝင်နေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဈေးကွက်မှာ ဒီကိစ္စ ကြောင့် ကျပ်ငွေရှားနေတာဖြစ်နိုင်ရဲ့လား စဉ်းစားစရာပါ။ တကယ်တော့ လူ့သဘောသဘာဝအရ ဒေါ်လာတန်ဖိုးမာတုန်းက ဒေါ်လာကို လက်ဝယ်မှာထားဖို့ စဉ်းစားခဲ့သလို၊ အခု ကျပ် ငွေမာတော့လည်း ကျပ်ငွေကိုပဲ စုဆောင်းဖို့ လုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။ ဒါမှ ငွေတန်ဖိုး အပြောင်း အလဲကြောင့် မိမိစီးပွားရေးကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ အချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အစိုးရက Unification of Exchange Rate လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာဈေးကို ချမှာပဲဆိုပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တန်ဖိုးကျတော့မှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ရတဲ့ဈေး တွေနဲ့ ထုတ်ရောင်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်း အထူးသဖြင့် ပဲမျိုးစုံလို ပို့ကုန်ပစ္စည်းအချို့မှာ ဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက အနာဂတ်ဈေးကွက်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကနေ ဖြစ်ရတာပါ။ အချို့ကတော့ တစ်ဒေါ်လာကို ၈ဝဝ နဲ့ ၈၅ဝ ကြားမှာရှိသင့်ပြီး၊ ဒီထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးကျမသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေကြတယ်လို့လည်း ဈေးကွက်ထဲက ကြားနေရပါတယ်။ ဒီတော့ လတ်တလောဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်း မှုကိုအကြောင်းပြုလို့ လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာငွေတွေရှိနေတဲ့ သူတွေက နေ့စဉ်ပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ပြီး (ကိုယ့်ဒေါ်လာကို မရောင်းရသေးပေမဲ့) ဆုံးရှုံးနေပြီလို့ ခံစားရသူတွေရှိသလို၊ ဆက်ကျမှာစိုးလို့ ရတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ လက်ဝယ် ကုန်ပစ္စည်းလှောင်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ အထူးသဖြင့် ပြည်ပပို့ကုန် ပစ္စည်းတွေမှာ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းဈေးပါကျလို့၊ လက်ထဲမှာ ပိုက်ထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ နေ့စဉ်တန်ဖိုးကိုတွက်ပြီး ဆုံးရှုံးနေ ပြီလို့ ခံစားနေရတာတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒေါ်လာ တန်ဖိုး ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဈေးမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရှိနေစေချင် သလို ဒေါ်လာတန်ဖိုး အပြောင်းအလဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဆက်ပြီး မဖြစ်စေချင်ကြတဲ့ ဆန္ဒရှိနေကြ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဈေးကွက်အရလား၊ ဈေးကစားသူကြောင့်လား ဒေါ်လာတစ်ယူနစ်တန်ဖိုး အပြောင်းအလဲကိုကြည့်ရင် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ပေါက်ဈေးအရ ရွက်စိမ်း ၇၅ဝ ကျပ်၊FEC ၆၇ဝ ကျပ်နဲ့ Earning ဒေါ်လာ ၇၆ဝ ကျပ်နဲ့ အနိမ့်ဆုံးရှိနေခဲ့ရာကနေ ဇွန်လ ၁၄ ရက်မှာ ရွက်စိမ်း ၇၆၅ ကျပ်၊FEC ၆၈ဝ ကျပ်နဲ့ Earning ၇၈ဝ ကျပ်ထိ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်လာဈေး တစ် နေ့တာလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရင် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းဈေး အဖွင့်မှာ ရွက်စိမ်းက ၈၂ဝ ကျပ်၊ FEC ၇၅ဝ ကျပ်နဲ့ Earning က ၈၂၅ ကျပ်ထိ ဈေးတက်ခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းဈေးကွက်မှာတော့ ရွက် စိမ်းက ၈ဝ၅ ကျပ်နဲ့ FEC ၇၄ဝ ကျပ်နဲ့ Earning ၈၁ဝ-၈၁၂ လောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုရင် ဒေါ်လာ ဈေးကွက်ထဲမှာ အကိုျးအမြတ်အတွက် ဈေးကစားသူတွေရှိနေတယ် ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒီလူတွေက မြန်မာစကားပုံအရ မီးလောင်ရာ လေပင့်တဲ့လူတွေလို့ ပြောလို့ရသလို အဆင်းကို ဘီးတပ်သူတွေလို့ လည်း ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ကျပ်ငွေတွေ ရှားနေပြီလို့ ပြောတဲ့လူတွေရှိ နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်၍ ဘဏ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ ငွေကြေးကျွမ်းကျင်သူမိတ်ဆွေကိုမေးကြည့်တော့ ''တကယ်တော့ ကျပ်လှည့်ပတ် ငွေက အစိုးရလက်ထဲမှာထက် လူထုလက်ထဲမှာက ပိုများပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဘာလုပ်သင့်သလဲလို့ စောင့်ကြည့်ပြီး ကျပ်ငွေကို လက်ထဲမှာကိုင်ထားကြသလို ဘဏ်တွေထဲမှာ အပ်ထားတဲ့လူတွေ လည်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း အများကြီးပါ'' လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင် ဒေါ်လာတန်ဖိုး အတက်အကျ အပြောင်းအလဲတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းတရားဟာ မြန်မာ့စီးပွား ရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကလည်း အဓိကအကြောင်း တရားတစ်ခုအဖြစ် သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ သွင်းကုန်တွေ ထိန်းချုပ်ထားလို့ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျသလား တချို့ကလည်း သွင်းကုန်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ Earning ဒေါ်လာဈေးကျရတာပါလို့ ပြောဆိုနေတာရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းတဲ့အခါ အခုလို အဖြေရပါတယ်။ ''၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ထဲမှာ ဧပြီလကနေ ဇွန်လဒုတိယ ပတ်အထိ သုံးလတာ ကုန်သွယ်မှုကိုကြည့်ရင် ပို့ကုန်ကဒေါ်လာ ၈၅၅ သန်းနီးပါးရှိပြီး၊ သွင်းကုန်က ၁၄၉ဝ နီးပါးရှိတာမို့ သွင်းကုန် တန်ဖိုးက ပို့ကုန်တန်ဖိုးထက် ဒေါ်လာ ၆၃၅ သန်း ပိုနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့ ဒီနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ် နှစ်ခုကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဧပြီကနေ ဇွန်လဒုတိယပတ်ထိ စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၁၂၃ဝ သန်းပဲရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်ကာလတူ မှာတော့ ဒေါ်လာသန်း ၁၆၉ဝ နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်ကထက်သန်း ၄၆ဝ ပိုတဲ့သဘောပါ''လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကစာရင်းဝင်တဲ့ ကုန်သွယ်မှု မှာ သွင်းကုန်ကများနေပြီ။ သိတဲ့အတိုင်း နယ်စပ်က တရားမဝင် ဝင်နေတဲ့တန်ဖိုးတွေကို ထည့်တွက်ရင် သွင်းကုန်ထိန်းချုပ်ထားလို့ ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျတယ်ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတိုင်း တန်ဖိုး အတက်အကျအပြောင်းအလဲရှိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဓိကကျတဲ့ ငွေကြေးတိုင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အဲဒီငွေကြေးကို ထုတ်ဝေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီး တန်ဖိုးအပြောင်းအလဲ တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ယူရိုနဲ့ ယန်း ငွေတွေရဲ့ ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရာမှာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း တန်ဖိုး ပြောင်းလဲမှုကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်စဉ် လအမည် ပျမ်းမျှပေါက်ဈေး ယူရို ဂျပန်ယန်း၁။ ဇန်နဝါရီ ဝ .၇၄၈၉၂ ၈၂ .၄၈၇၅ဝ၂။ ဖေဖော်ဝါရီ ဝ .၇၃၂၆၈ ၈၂ .၅၈၇၇၇၃။ မတ် ဝ .၇၁၄၁၃ ၈၁ .၆၁၁၅ဝ၄။ ဧပြီ ဝ .၆၉၂၆၄ ၈၃ .၂၇၁၁၁၅။ မေ ဝ .၆၉၇၃၃ ၈၁ .ဝ၈၁၇၆၆။ ဇွန် (၁၅ ရက်ထိ) ဝ .၆၉၁၃၃ ၈ဝ .၄၅၁၄၄ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဇယားကိုကြည့်ရင် ဒေါ်လာတန်ဖိုးနဲ့ လဲလှယ်ရာမှာ ယူရိုနဲ့ ဂျပန်ယန်း နှစ်မိုျးစလုံး တန်ဖိုးတွေတက်နေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်သလို အတက်အကျအပြောင်းအလဲလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောထားကိုသိရင် မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ မိမိလက်ထဲမှာ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုကို ၃-၄ လလှောင်ပြီးမှ ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူးသင့် မသင့် စဉ်းစားဖို့လိုပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်ပြီး လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့နဲ့၊ ငွေလှည့်ပတ်တဲ့အကြိမ် Turn Over များများရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဈေးကွက်မျိုးကိုဖော်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းနယ်မြေတွေမှာ Bonded warehouse တွေတည်ဆောက်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ Buyer တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်း သဘောတူညီမှုတွေရယူ ကာ ပစ္စည်းအပ်၊ ငွေထုတ်ယူတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပြီလို့ အကြံပြု လိုပါတယ်။ တရားဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှဖို့နဲ့ ကုန်သွယ်ဖို့လိုအပ် ပြည်ပက လုပ်ငန်းရှင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှဖို့အမြဲ ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု ဥပဒေ၊ မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေး ဇုန်ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက အမည်ခံပြီး တရားမဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ငွေတွေသယ်ယူလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နံှ ဆောင်ရွက်နေမဲ့အစား ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမဲ့ငွေတွေကို ဘဏ်တွေကတစ်ဆင့် တရားဝင် ဝင်ရောက်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှကြဖို့လိုပါပြီ။ ဒီလိုပဲ ကုန်သွယ်မှုပိုင်း မှာလည်း တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်က ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်သူ တွေရှိသလို ခုအချိန်ထိ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ ရောင်းဝယ်နေသူတွေရှိနေပါတယ်။ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုကြောင့် တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုတွေအနေနဲ့ ဈေးကွက်မှာယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကျဆင်းရသလို တရားမဝင်စီးဆင်းနေတဲ့ ငွေကြေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်း ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များပြောတဲ့ ''အဝေး''လို့ခေါ်တဲ့ ဟွန်ဒီ လမ်းကြောင်းပါ။ ငွေကြေးဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်း ရာမှာ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းနေမှုတွေကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ တစ်နည်းအားဖြင့် မျှတတဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပတ်ဝန်းကျင် (Fair Trade Environment) ဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းသွားဖို့လိုပြီလို့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ စီးပွားရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ စက်သုံးဆီ တင်သွင်းတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုထဲကိုပဲ လေ့လာမယ်ဆိုရင် တရားဝင်တင်သွင်းမှုကို ဆောင်ရွက်နေသူတွေရှိသလို၊ တရားမဝင် တင်သွင်းမှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မဖြစ်သင့်တော့ဖူးလို့ ထင်မြင် ယူဆပါတယ်။ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုနဲ့အတူ တရားမဝင်ငွေကြေး စီးဆင်းမှုတွေ ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က အချက်အားလုံးကို ခြုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရင် ပြင်ပ မှာ ဒေါ်လာဈေးကျအောင် အစိုးရက လုပ်နေသလို ပြောဆိုနေကြပေမဲ့ အရင်းစစ်တော့ မည်သူမပြု မိမိမှုပါပဲ။ ပဲသမား၊ ဆန်သမား၊ ရေထွက်သမား၊ သစ် သမား၊ ပို့ကုန် သမားတွေ ထိခိုက်နေရတာ မှန်ပါတယ်။ ဒေါ်လာဈေးကျလို့ပေါ့။ ဒေါ်လာဈေးကျရတာဟာ တရားမဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှု အသုံး စရိတ် လိုအပ်ငွေအတွက် တရားမဝင် ဒေါ်လာသွင်းယူ ဖလှယ်သုံး ရတာတွေ၊ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုအရ နိုင်ငံခြားမှာ မိမိတို့ပိုင် ဒေါ်လာငွေတွေကို မိမိတို့ ပြည်တွင်းသုံးစွဲလည်ပတ်ဖို့ တရားမဝင် ပြန်သွင်းရတာတွေ၊ တရားမဝင် မှောင်ခိုသွင်းပစ္စည်း တန်ဖိုးကို ယခင်က မှောင်ခိုသစ်၊ ကျောက်မျက်၊ ကွဲျနွား ပို့ပြီး ဖလှယ် ရာက ခက်ခဲလာတဲ့အတွက် မြန်မာကျပ် ငွေတွေ ရွှေလီမှာ ဆာလာ အိတ်နဲ့ပုံနေရတာတွေ၊ တရားမဝင် စက်သုံးဆီတင်သွင်းမှုအပါအဝင် တရားမဝင် လုပ်ငန်းတွေအတွက် တရားမဝင်ငွေကြေးဖလှယ်ရတာ တွေ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်သားတွေ သာ အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သည်ထိခိုက်ရင် စက်မှုလုပ်ငန်းသမား ဒေါ်လာသွင်း လုပ်မှု အချို့ကြောင့်ဖြစ်သလို စက်မှုလုပ်ငန်းသမား တွက်ခြေမကိုက် ရင်လည်း အပြန်အလှန် သဘောဆောင်နေသလို၊ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်သူတို့ ဈေးကွက်မယှဉ်နိုင်တာ အခွန်မဆောင်ပဲ မှောင်ခိုသွင်းသူ ကြောင့်ဖြစ်ရတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ကုန်သည်နဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်ကြားမှာ ကုန်သည်၊ စက်မှုအသင်းဟာ ဒိုင်လူကြီးဖြစ်သလို (Shadow Investment) တရားမဝင်အမည်ခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှတာတွေ ရဲ့ ငွေလိုအပ်ချက်နဲ့ စီးဝင်မှုကို ကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်အားလုံး အသိဆုံးပါပဲ။ အစိုးရက ဒေါ်လာတရားဝင်ပို့လာရင် Account Transfer နဲ့ ဖလှယ်သုံးခွင့်ပေးပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ INGO အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေဟာ တရားဝင်ဘဏ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေပေးပို့ဆောင် ရွက်ကြရင် ဈေးကွက်မှာ Dollar Supply များတဲ့ပြဿနာ ဒေါ်လာဈေးကျတဲ့ပြဿနာအထိုက်အလျောက်လျော့ပြီး ကုန်သည်တို့ ခံသာမှာပါ။ ကုန်သည်တို့ ခံသာအောင် လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပဲ မိမိတို့လုပ် ရပ်တွေကို ပြုပြင်ကြရမှာပါ။ အချုပ်အားဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးလောကကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းချင်ရင် ွGood Govermance/ Clean Government ဆိုပြီး အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများသာ ကောင်းလို့မရသလို၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြင်ရုံနဲ့လည်း စီးပွားရေးဝန်းကျင် (Business Environment) ကြီး ကောင်းမလာသရွေ့ ကောင်းလာဖို့ အလားအလာဝေးနေအုံးမှာပါ။ စီးပွားရေးဝန်းကျင် (Business Environment) ကြီးတစ်ခု လုံးကောင်းလာဖို့ စီးပွားရေးလောကသားတွေဟာ ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ်မှာ လူသစ်၊ စိတ်သစ်နဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် မျှမျှတတနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ရှေးရှုလုပ်ဆောင်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း အစိုးရ ရော ပုဂ္ဂလိကပါ ပူးပေါင်းလက်တွဲကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။" အစိုးရက ဒေါ်လာတရားဝင်ပို့လာရင် Account Transfer နဲ့ ဖလှယ်သုံးခွင့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ INGO အပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတွေဟာ တရားဝင်ဘဏ်မှာ နိုင်ငံခြားငွေပေးပို့ဆောင်ရွက်ကြရင် ဈေးကွက်မှာDollar Supply များတဲ့ ပြဿနာ ဒေါ်လာဈေးကျတဲ့ ပြဿနာ အထိုက်အလျောက်လျော့ပြီး ကုန်သည်တို့ခံသာမှာပါ . ."
ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရန်ကုန်တာယာစက်ရုံ မြန်မာနိုင်ငံက နှစ်စဉ်ရော်ဘာတွေ ပြည်ပကို တင်ပို့လျက် ရှိပါတယ်။ ၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ထိ လွန်ခဲ့ တဲ့ ငါးနှစ်က ပြည်ပကိုတင်ပို့ခဲ့တဲ့ပမာဏကိုကြည့်ရင် တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ တန် ၆၃ဝဝဝ တင်ပို့ခဲ့တဲ့အတွက် ပျမ်းမျှဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၄၁ သန်း ရရှိခဲ့တာ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ရော်ဘာကို အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် သုံးစွဲပြီး ထုတ်လုပ်ရတဲ့ ကားတာယာတွေ တင်သွင်းခဲ့ တာကိုကြည့်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ် (၂ဝဝ၆-ဝ၇ မှ ၂ဝ၁ဝ- ၁၁) မှာ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၅၃ သန်း တန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုတစ်နေရာ အသေအချာ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရနဲ့ Semi Government ပိုင်တဲ့ တာယာ စက်ရုံတွေရှိပေမဲ့ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို လုံလောက်အောင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ပြည်ပကတာယာတွေ နှစ်စဉ် တင် သွင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ပြည်တွင်းမှာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ တာယာထုတ်လုပ်မှု မရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ ပြည်တွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် ၄ အမှတ် ၃၆/၃၇ ပန်းပဲ မောင်ခက်လမ်းရှိ မြေဧက ၁ဝ ဧကပေါ်တွင် ရန်ကုန်တာယာစက်ရုံကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ ဇူလိုင်လမှာ ပြည်ပသွင်းကုန် အစားထိုး ဖြစ်တဲ့ နိုင်လွန်တာယာများကို တရုတ်(တိုင်ပေ) စက်သစ်ကြီးများ အသုံးပြုကာ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များဦးစီးပြီး EUROPEAN STANDARD နဲ့အညီ ဂျပန်နည်းပညာကို အသုံးပြု ကာ နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးမီ နိုင်လွန်တာယာများကို စတင်ထုတ် လုပ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဈေးကွက်အကြိုက် ကားတာယာများကို ပြည်တွင်း၌ တွင်ကျယ်စွာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိ ''စက်ရုံက လုပ်သားအင်အား ၈ဝ လောက်နဲ့ တစ်နေ့ကို တာယာဆိုက်ဒ်စုံ ၂၅ဝ ခန့်ကို နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးအတိုင်း ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့တာယာ အမျိုးအစားများက တော့ 5.00-12 (8 PR) ၊ 5.00-13 (8 PR) ၊ 6.00-13 (10 PR)၊ 6.00-14 (8 PR) ၊ 650-14 (10 PR)၊ 7.00-15 (14 PR) ၊ 7.00-16 (14 PR) ၊ 7.50-16 (16 PR)(Rib) ၊ (Lug) ၊ 8.25-16 (18 PR)၊ (Lug) တွေပါဘဲ'' လို့ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။ ''စက်ရုံက တာယာများကို ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ စက်ယူနစ်တွေကို PLC System နဲ့ပဲ သုံးပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ကို အဓိကထားပါတယ်၊ အခြေအနေပေးရင်တော့ Export အထိသွားမှာပါလို့'' အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ ထပ်မံ ရှင်းပြပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းရရှိမှု အခြေအနေ တာယာထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်နေတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ RSS-1 ရော်ဘာများကို မွန်ပြည်နယ် သထုံ၊ သံဖြူဇရပ်နှင့် ထားဝယ် မြို့နယ်များရှိ ခြံများသို့ တိုက်ရိုက်ဆင်းဝယ်ယူသလို ပစ္စည်းပြတ် လပ်မှုမရှိအောင်လည်း ကြိုတင်ဝယ်ယူစုဆောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျာမဏီ၊ ကိုရီးယား၊ ရုရှား၊ တရုတ် (တိုင်ပေ)တို့မှ ထုတ်လုပ်သော Synthetic ရော်ဘာ၊ အပူဒဏ်ခံနိုင် တဲ့ နိုင်လွန်ကြိုး (Nylon 66) ISO အဆင့်အတန်းရှိသော ဓာတု ကုန်ကြမ်းများကိုလည်း မှာယူသုံးစွဲပြီး အဆင့်မြင့် တာယာတွေကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု စက်ရုံမှထုတ်လုပ်တဲ့ တာယာများကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘုရင့်နောင် Show Room မှာရောင်းသလို စက်ရုံကလည်း တိုက် ရိုက်စနစ်နဲ့ တစ်ပြည်လုံးသို့ ဈေးနှုန်းခိုျသာစွာနဲ့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ပေးနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ စက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့ ဒီတာယာတွေကို လုပ်ငန်းသုံး အုတ်သဲကျောက်ယာဉ်တွေ၊ မထသယာဉ်တွေ၊ ဒိုင်နာ၊ ဟိုင်းလပ်နဲ့ ဘိလပ်မြေတင်တဲ့ယာဉ်တွေက အများဆုံးဝယ်ယူသုံးစွဲ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စက်ရုံက ထုတ်လုပ်တဲ့တာယာတွေက Fresh ဖြစ်တဲ့အပြင် ထုတ်လုပ်တဲ့ Manufacturing Date လည်းပါရှိတာမို့ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေ အကြိုက်တွေ့လို့ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အုတ်သဲကျောက်ကားပိုင်ရှင်တစ်ဦး က ''ဒီရန်ကုန်တာယာက ထုတ်လုပ်တဲ့တာယာတွေက နိုင်ငံတကာ ထုတ်လုပ်တဲ့ တာယာတွေနဲ့ အရည်အသွေးတူသလို ဈေးနှုန်းချိုသာ ခြင်း၊ ပိုမိုကြာရှည်ခံခြင်း၊ အာမခံအပြည့်အဝပေးနိုင်ခြင်း တို့အပြင် Fresh တာယာများဖြစ်တာကြောင့် သုံးစွဲရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေ တယ်''လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းတာယာသုံးစွဲသူ အများစုကလည်း ပြည်ပကဝင်လာတာတွေနဲ့ အရည်အသွေးတူရင် ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး Fresh ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဘဲ သုံးစွဲလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထပ်မံတိုးခဲျ့ ထုတ်လုပ်မည် ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုအရ နောက် နှစ်လလောက်ဆိုရင် တစ်နေ့ကို တာယာဆိုက်ဒ်စုံ ၅ဝဝ ခန့် ထပ်မံတိုးခဲျ့ထုတ်လုပ်သွားမယ်'' လို့ စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ ၎င်းကပဲ ထပ်မံပြော ဆိုရာမှာ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ အချိန်တို အတွင်း ဈေးနှုန်း ချိုချိုQuality ကောင်းကောင်းနဲ့ Fresh ဖြစ်တဲ့ တာယာတွေကို သုံးစွဲနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဈေးကွက်တောင်းဆိုချက်အရ တာယာထုတ်လုပ်မှု ကို တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရာမှာ လုပ်သားဦးရေ ၁၈ဝ ခန့်အထိ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေပိုပြီး ရရှိလာတာတွေ့ရပါတယ်။ လုပ်သား တွေကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက် ပြည်ပပညာရှင်များက မကြာခဏ သင် တန်းတွေ ပို့ချတာကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တာယာထုတ်လုပ်ရာမှာ အရင်က မီးမမှန်လို့ အခက်အ ခဲရှိပေမယ့် အခုတော့ မီးကပုံမှန်နီးပါးရတော့ ထုတ်လုပ်ရတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သွင်းကုန်အစားထိုးတာယာထုတ်လုပ်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုတိုးတက်လာရင် ပြည်ပသွင်းကုန်မှာယူမှု လျော့နည်း လာကာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်မယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းတွေ များလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပက တင်သွင်းရတဲ့ တာယာတွေနေရာမှာ အောင်မြင်စွာ အစားထိုးရောင်းချနိုင်တာဟာ မြန်မာ့တာယာထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းရဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အထက်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း နှစ်စဉ်ပြည်ပကို တန်ချိန် တစ် သိန်းနီးပါးတင်ပို့နေရတဲ့ ရော်ဘာတွေကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ လက်ရှိလည်း ဝယ်လိုအားရှိနေပြီး အနာဂတ်ကာလမှာလည်း ပိုမို တိုးတက်ဖို့သာရှိတဲ့ တာယာတွေကို စက်ရုံထူထောင်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ် နံှလုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျား။
တို့ဆေး မှဲ့ဆေး နဲ့ ယနေ့သရက်သီးဈေးကွက် တစ်ရက်မှာ ဈေးထဲကဝါဝင်းမဲှ့နေတဲ့ စိန်တလုံးသရက်သီးကိုတွေ့လို့ စားချင်စိတ်နဲ့ဝယ်စားမိပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ခွဲပြီးစားတဲ့အခါ ချဉ်စုတ်စုတ်အရသာနဲ့အသားကလည်း ပျော့စိစိဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ သရက်သီး စားချင်စိတ်ကလည်း ပြင်းပြတော့ သကြားဖြူးပြီး အချိုအရသာရှိအောင် လုပ်ပြီးမှ စားရပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလို ဖြစ်ရသလဲလို့ စုံစမ်းတဲ့အခါရင့်မှည့်မှုမရှိသေးတဲ့အသီးတွေကို တို့ဆေးနဲ့ မှည့်အောင်လုပ်တာကြောင့်လို့ သိရတဲ့အတွက်သရက်သီးနဲ့ တို့ဆေးပြဿနာကို ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့ပါတော့တယ်။ တို့ဆေးနဲ့ စိမ်ဆေး နှစ်မျိုး သရက်သီးရောင်းသူပွဲစားများနဲ့ တောင်သူများအသုံးပြုနေတဲ့ သရက်သီးမှည့်ဆေးမှာ ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။ အသီးအညှာကိုတို့ထိစေပြီး မှည့်တဲ့ဆေးနဲ့ အသီးတစ်လုံး လုံးကိုဆေးရည် စိမ်တဲ့မှည့်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးကိုတို့တဲ့ ဆေးမှာ ယိုဒယားနိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာတဲ့ ethylene ၃ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဆေးများ ဖြစ်ပြီး သစ်သီးများအရွယ်ရောက်ချိန် မဆွတ်ခူးမီ အမှည့်ညီညာစေဖို့ ပက်ဖြန်းတဲ့ ဆေးရည် ဖြစ်ပါတယ်။ စိမ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ ဆေးမှာ တရုတ်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ဆေးနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေ သကြီးတို့မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ဆေးများမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီများ မတူညီပေမဲ့ ethylene ဆေးပါဝင်မှု ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ချင်းတူညီပါတယ်။ အသုံးပြုသောဆေးများအားလုံး ဟာ မြန်မာစာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ရေးသားထားခြင်းလုံးဝမပါရှိဘဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံသုံးဘာသာစကား ဖြင့်သာ ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ အသုံးပြုနေတဲ့ မြန်မာများ လုံးဝနားလည်မှုမရှိနိုင်ခြင်းမရှိတာလည်း သိရပါတယ်။ မဲှ့ဆေးသုံးတာ ဒေသအလိုက်ကွဲပြား မြန်မာနိုင်ငံမှာပင်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မှည့်ဆေးအသုံးပြုပုံခြင်းမတူညီတာတွေ့ရပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ဘက်က ယိုးဒယားနိုင်ငံထုတ်ဆေး ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို တို့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပြီး မှည့်စေပါတယ်။ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးမှာ အသုံးပြုသောဆေးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ၃ ရာခိုင်နှုန်း မှည့်ဆေးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆေး ၂ မျိုးကို ရေနဲ့ ရောစပ်အသုံးပြုပါတယ်။ ရောစပ်မှုနှုန်းထားမှာ ရေတစ်ဂါလံကို ယိုးဒယားဆေး အဖုံးတစ်ဖုံး (၁ဝ စီစီ)ခန့် နဲ့ တရုတ်ဆေးဖုံး ၃ ဖုံး (၅ဝ စီစီ)မှ ၅ ဖုံး (၈ဝ စီစီ) ထိသရက်ရင့်မှည့်မှု အနေအထားအရ ရောစပ်ပါတယ်။ နုတဲ့အသီးဆိုရင် ဆေးပိုမိုသုံးစွဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး အလွန်အမင်းနုပါက အရက်ဆီ ထည့်သွင်းရောစပ်တာကိုလည်း သိရပါတယ်။ ၎င်းဖျော်ရည်ကိုစတီးဇလုံအတွင်း ထည့်စပ်ဖျော်ပြီး သရက် သီးများကို စွတ်စိုရုံထည့် ပြီးချက်ချင်းပြန်ဆယ်ကာ အခြောက်ခံထုပ်ပိုးပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးသုံးတဲ့ သစ်သီးများရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ ယင်းမှည့်ဆေးမှာသရက်သီးများသာမက ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ နာနတ်သီးတို့၌ပင် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေတာကိုလည်း သိရပါတယ်။ ဆေးတို့၊ ဆေးစိမ်ထားသောသရက်သီးများ၏ သွင်ပြင် လက္ခဏာများမှာ - - သရက်သီးပေါ်ရှိဖယောင်းသားအလွှာပြောင်လက်ခြင်းမရှိတော့ပါ။- အသီးအညှာမှာ အနီရောင်သမ်းပြီး မည်းခြောက်ခြောက် ဖြစ်လာပါတယ်။- ဆေးရည်အသုံးမပြုသောအသီးထက်အရည် ပါဝင်မှုပျော့ပျောင်းမှု ပိုဖြစ်ပါတယ်။- အချိုဓာတ်ပါဝင်မှုလျော့နည်းပါတယ်။- ဆေးရည်အမျိုးအစား သိပ်မများပါက ၇ ရက်အထိ အထားခံပြီး ဆေးရည်များပါက ၃ - ၄ ရက်မှာ ပျော့ပျောင်း ပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။- သဘာဝအတိုင်း သရက်သီး ရင့်မှည့်ပြီးပါက ၁ဝ ရက်ခန့် အနည်းဆုံးအထားခံပါတယ်။ သုံးစွဲသူများ သိရှိနိုင်တဲ့ ဆေးအညွန်းများ ပါဝင်ဖို့လို လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆေးရည်များအသုံးပြုသူ အားလုံးဟာ ဆေးအကြောင်း ပြည့်စုံစွာသိရှိသူများမဟုတ်ကြဘဲ တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နဲ့သာ သိရှိအသုံးပြုသူများဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအညွှန်းများ၊ သတိပေး ချက်များမှာလည်း မြန်မာများနားမလည်တဲ့ တရုတ်စာ၊ ယိုးဒယားစာများဖြင့်ရေးသားထားတဲ့အတွက် သုံးစွဲသူအနေနဲ့ အကျိုးအပြစ်နဲ့ သုံးစွဲနည်းတွေကို ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ်တော့ ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေအရ မြန်မာများနားလည်စေဖို့ မြန်မာစာနဲ့သာ ရေးသားဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ဆေးဟာ သီးနံှများမဆွတ်ခူးမီအသီးများ အပင်ပေါ် ရှိစဉ်အမှည့်ညီညာစေဖို့ အတွက် ကြိုတင်ပက်ဖျန်းတဲ့ ဆေးများသာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆေးရည်များကို ရေသန့်နဲ့ ရောစပ် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတာတွေမှာ ဆေးရည်သီးသန့် အသုံးပြုခြင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံထုတ်ဆေးများကို စိတ်ကူးရှိသလို ရောစပ်အသုံးပြုနေခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ မှည့်ဆေးမသုံးသေးတာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပါ အသီးမှည့်ဆေးများကိုအသုံးပြုနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့အနက် အများဆုံးအသုံး ပြုနေတဲ့ ဒေသမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအရရော တွေ့ဆုံမေးမြန်း မှုအရပါ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှထွက်ရှိတဲ့ ရင်ကွဲ၊ မချစ်စု စတဲ့ သရက်သီးအားလုံးနီးပါး (၁ဝဝ) ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးစိမ် သရက်သီးများဖြစ်ကြပါတယ်။ လုံးဝနီးပါး မှည့်ဆေးအသုံးမပြုသေးတဲ့ ဒေသကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း သရက်ခြံများ ဖြစ်ပါတယ်။ သရက်ပေါ်စမှာ အသုံးများ သရက်မှည့်ဆေးအသုံးပြုမှုကာလဟာ သရက်သီးစပေါ်စ ဧပြီ၊ မေလအထိဆေးရည်စိမ်ကြပြီး ရင့်မှည့်ချိန်ရောက်တဲ့ မေလကုန်ခါနီးနဲ့ ဇွန်လထွက်သရက်သီးများကိုတော့ ဆေးစိမ်မှု မပြုလုပ်ကြတော့ ပဲ သဘာဝအတိုင်းလှေသမ္ဗာန်များပေါ်မှာ တာလပတ်အုပ်ခြင်း၊ ကောက်ရိုးအုပ်ခြင်းတို့နဲ့ ခရီးလမ်း မှာ မှည့်စေကာ ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှ တင်ပို့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသုံးပြုမှုမမှန်ပါက ဆုံးရှုံးမှုများ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှာလည်း သရက်သီးများမှည့်ဝင်းလာစေဖို့ ethylene ဖြန်းခြင်း၊ ကာဗိုက် ထည့်ခြင်းများပြုလုပ်မှုရှိပါတယ်။ အတိုင်းအဆမှန်ကန်စွာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အကျိုးရှိတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မှည့်ဆေးအသုံးပြုမှုဟာ အချိုးအဆမမှန်ကန်ခြင်း၊ သုံးစွဲပုံလွဲချော်ခြင်း တို့ကြောင့် အသီးများ ကြာရှည်အထားမခံဘဲ ပျက်စီးလွယ်ကာ နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့ဖို့အခွင့်အလမ်း နည်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှည့်ဆေး လွန်လွန်ကဲကဲအသုံးပြုလာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကလည်း မှည့်ဆေးများအသုံးပြုခဲ့ကြပေမဲ့ ယခုနှစ်မှာမှည့်ဆေးအသုံးပြုမှု လွန် လွန်ကဲကဲ ဖြစ်ပြီး လူသိများလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ ရာသီဥတုကြောင့် ယခုနှစ်သရက်သီးခူးရက် နောက် ကျ ခဲ့ပေမဲ့ ပုံမှန်နှစ်အတိုင်း သရက်သီး ရာသီစချိန်ခူးတဲ့ သရက်သီးများဟာ နုနယ်နေသေးခြင်းနဲ့ မိုးဦးလေဦးလေပြင်းတိုက်ပြီးအသီးများေြွကကျ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရိမ်ကာ မရင့်မီ ခူးရောင်းချခြင်း တို့ကြောင့် မှည့်ဆေးကို ပိုမိုသုံးစွဲလာကြတဲ့အတွက် လူအများသိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများ အသိပညာြွကယ်ဝဖို့လို မှည့်ဆေးအသုံးပြုသူများအားလုံးဟာ တိတိကျကျသိရှိနားလည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်စကားနဲ့သာ လုပ်ဆောင်နေကြသူများဖြစ်ပြီး ကောင်းနိုးရာရာကို လိုက်လုပ်ကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးများသွားရင် စားသုံးသူဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြရာ ဆေးသုံးစွဲသူမှ ဘာမှမဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရည်ကိုပါးစပ်နဲ့ တို့ပြပြီး ချဉ်ပြုံးပြုံးအရသာရှိကြောင်းပြောပြပါတယ်။ မှည့်ဆေးအသုံးပြုသူများဟာ ဆေးများအလွယ်တကူရရှိခြင်း (သရက်သီးပွဲရုံများမှာပင် ဝယ်ယူရနိုင်ပါတယ်)ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း( ၂၃ဝဝ ကျပ်မှ ၂၅ဝဝ ကျပ် သာရှိခြင်း၊) မိရိုးဖလာမီးခိုးမှိုင်းကြပ်တိုက်ခြင်းဟာ ခက်ခဲလက်ဝင်မှုရှိပြီးအပျက်အစီးရှိခြင်း၊ မှည့်ဆေးစတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ယခင်နှစ်များကလည်း စားသုံးသူများမသိရှိဘဲ အရောင်အဆင်းမှည့်ဝင်းမှုကြောင့် နှစ်သက်စွာဝယ်ယူခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ယခုနှစ်မှာ ပိုမိုအသုံးပြုလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ စိုက်ပျိုးသူများနဲ့ သုံးစွဲသူများကို ပညာပေးဖို့လို အလွန်အကံျွ ဆေးသုံးထားတဲ့ အသီးများရဲ့ အရသာကွာခြားတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးလုံခြုံ စိတ်ချရမှု မရှိတဲ့ အသီးများကို အမြင်လှပမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ စားသုံးသူများဝယ်ယူမစားသင့်သလိုသုံးစွဲသူများလည်း ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုနဲ့ အကျိုးအာနိသင်တို့ကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သုံးစွဲသူများဟာ မှည့်ဆေး အသုံးပြုမှုကို မသိရှိ၊ နားမလည်သလိုစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ၊ ဗဟုသုတများလည်း နားမလည် "ဆေးများသွားရင် စားသုံးသူဒုက္ခဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြရာ ဆေးသုံးစွဲသူမှ ဘာမှမဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရည်ကိုပါးစပ်နဲ့ တို့ပြပြီး ချဉ်ပြုံးပြုံးအရသာရှိကြောင်း ပြောပြပါတယ် " ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရက်သီးအများအပြားထွက်ရှိရာ ဒေသများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်များး၊ အသင်း အဖွဲ့များမှလည်းကောင်း၊ စိုက်ပိုျးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပို့ချခြင်းဖြင့် GAP (စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အထကောင်းများ) ပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးပို့ချပြီး ပြန်လည်တည့်မတ် ပေးသင့်ပါ တယ်။ အဲဒီလို ပညာပေးရာမှာ စိုက်ပျိုးသူများအပြင် ရောင်းဝယ်သူများကိုလည်း ပညာပေးဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ယင်းဆေးများတင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့ ကုမ္ပဏီများ၊ ဆေးဆိုင်များအနေနဲ့လည်း တရား ဝင်တင်သွင်းတဲ့ ဆေးများဖြစ်စေဖို့နဲ့ မြန်မာစာဖြင့်နားလည်လွယ်စေရန် ရေးသားရောင်းချမှု များပြုလုပ်လာစေဖို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း စားသုံးသူကာကွယ်ရေးနဲ့ ပြည်ပတိုးတက်တင်ပို့ရေး အကျိုးမျှော်ပြီး ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ သစ်သီးဝလံ အသင်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ် မှည့်ဆေးဘူးပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အထူးသတိပြုရမည့် အချက်များ၁။ ဆပ်ပြာဓာတ်ပါဝင်သောဆေးရည်များနှင့် ရောနှောခြင်းလုံးဝမပြုရ။၂။ ရာသီဥတုမိုးခေါင်ခြင်းနှင့် မြေဆီမပြည့်ဝသော နေရာနဲ့ ပိုျးပင်နုနယ်တဲ့ အချိန်မှာ ဆေးရည် ကို ကဲျကဲျသာအသုံးပြုပါ။ ဒါ့အပြင် ပထမအကွက်ငယ်ပေါ်မှာ စမ်းသပ်သုံးစွဲပါ။ သို့မှသာ ဆေးရည်အကဲျ၊ အပျစ်ကို မှန်းဆပြီး မှန်ကန်စွာသုံးစွဲနိုင်ပါမယ်။ ဒါ့အပြင် မြေဆီပြည့်ဝဖို့် မိုးရေချိန်များတဲ့ အပူချိန်နိမ့် ဒေသ၊ အပင်ရှင်သန်မှု ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဒေသမှာ ကျန်ဆေးရည် ကို အကွက်ငယ်ပေါ် စမ်းသပ်သုံးစွဲကာ ဆေးရည်အပျစ်အကဲျကိုမှန်းဆပြီး သုံးစွဲရပါမယ်။၃။ အသုံးမပြုမီ နည်းပညာကို စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ အခြားဆေးရည် မသုံးဘူးတဲ့ မြေကွက်ငယ်ပေါ် စမ်းသပ်ပြီးမှ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပါ။၄။ ရက် ၂ဝ မှ ၃ဝ အတွင်း ခြား အသုံးပြုပါ။၅။ ဆေးရည်ကို ရေသန့်နဲ့ ရောနှောပြီး လယ်မြေအတွင်းသို့ ရောပက်ဖျန်းရမယ်။ သိုလှောင်ပုံနဲ့ သယ်ယူခြင်း ethylene ဓာတ်ပြုဆေးရည်ဟာ ချုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆပ်ပြာ ဓာတ်ပါတဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းမပြုရပါ။ ဒါကြောင့်သစ်သားရေပုံး၊ အလူမီနီယံရေပုံးများနဲ့ သိုလှောင်ခြင်း များမပြုလုပ်ရပါ။ သံထည်နဲ့အခြားသတ္တုအမျိုးအစားများဖြင့်လည်း မသိုလှောင်ရပါ။ မီးနဲ့ ဝေးရာတွင် ထားပါ။ အပူလိုင်းဓာတ်ဆားပေါက်သောမြေ Oxygen နဲ့ ရောစပ်တဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။ အခန်းအပူချိန်တည်ငြိမ်တဲ့ နေရာမှာထားပြီး ဆေးရည်ကိုလှုပ်ယမ်းခြင်း မပြုလုပ် ရပါ။ သိုလှောင်ရာမှာ အဖုံးကို တင်းကြပ်စွာပိတ်ထားပါ။ အဖုံး၊ အဆို့များကို သေချာစွာထိန်းသိမ်းကာ မှောင်ပြီး အေးမြတဲ့နေရာမှာ ထားပါ။ ဆေးရည်ဟာ ethylene ဓာတ်ပြုဆေးရည်ဖြစ်တာကြောင့် လှိုက်စားပျက်စီးခြင်းကို အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သယ်ယူရာမှာ ညင်သာစွာသယ်ယူရမယ်။ စားသောက်ကုန်၊ မျိုးပင်၊ မျိုးစေ့များ၊ ကစားစရာပစ္စည်းများနဲ့ ရောမသိုလှောင်ရပါ။သီးနှံအမျိုးအစား အသုံးပြုပုံ ဆေးရည်အသုံးပြုရန်ပမာဏ အသုံးပြုနည်းခရမ်းသီး သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၅၃ဝ-၁ဝဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်ဝါဂွမ်း သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၃၃ဝ-၅ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်ဝါဂွမ်း အထွက်တိုးစေရန် ၃၃ဝ-၅ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်တည်သီးပင် သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၄ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်စပါး သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၈ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်စပါး အထွက်တိုးစေရန် ၈ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်ငှက်ပျောပင် သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၄ဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်ရော်ဘာပင် အထွက်တိုးစေရန် ၅-၁ဝ စီစီ ဆေးပင် သီးနံှအမှည့်မြန်စေရန် ၁ဝဝဝ-၂ဝဝဝ စီစီ ဖျန်းပက်ရန်ဆေးရည်တွင်ပါဝင်သောဓာတုပစ္စည်း ဆေးရည်ဟာ သိပ္ပံနည်းကျ ဓာတုဗေဒနဲ့ ပြုလုပ်ပြီး ကောက်ပဲသီးနံှများရဲ့ ကြီးထွားနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် (ethyl - အီသိုင်း)ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် ဆေးရည်များ သီးနံှများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရှိပါက ethylene ဓာတ်များ တဖြည်းဖြည်းပံျ့နံှ့ဝင်ရောက်သွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် သီးနံှများကြီးထွားစေဖို့နဲ့ အရွက်များဝေဆာစေဖို့အတွက် များစွာအကျိုးပြုစေပါတယ်။ ဆေးရည်ဟာ သီးနံှများအမှည့်မြန်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပြီး အပင်များကျွတ်ခြင်းနဲ့ အားနည်း ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း အကျိုးဆက်များအတွက် ပြင်ဆင်ဖွယ်ရာများ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ ကြီးမားလာနေတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာ့ စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်း အတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်တာ အားလုံး သတိထားမိမှာပါ။ လူ၊ သတ္တဝါတို့ရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို တခဏအတွင်းမှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေနိုင်တဲ့ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှု ပြုနိုင်သလို ရာသီအပြောင်းအလဲနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း မိုးလေဝသအခြေအနေကို သိရှိနားလည် နိုင်ဖို့ အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မိုးလေဝသ အခြေအနေ တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်)မှာ မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင် ဟောပြောတဲ့ ''မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ယင်းရဲ့ အကျိုးဆက်များ'' ဟောပြောပွဲကို စာရေးသူတက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပထမအကြိမ် ဟောပြောပွဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သီးနံှရောင်းဝယ် နေတဲ့ ကုန်စည်ဒိုင်၊ ကုန်သည်များအတွက် သီးနံှအထွက်ကောင်းပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရေးဟာ အရေးပါသလို အဲဒီလိုသီးနံှတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ မိုးလေဝသဟာ အရေးကြီးတာမို့ အသင်းဝင်တွေ အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေဖို့ ဒီဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကုန်စည် ဒိုင်ဥက္ကဌဦးအုန်းဆိုင်က ဆိုပါတယ်။ မိမိ ပြည်တွင်း မိုးလေဝသ နဲ့အတူ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ အဓိကဝယ်ယူနေတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မိုးလေဝသဟာလည်း ကုန်သည်တွေအတွက် အရေး ပါတယ်လို့ ထပ်လောင်း ပြောကြားပါတယ်။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အနားယူခဲ့တဲ့ မိုးလေဝသ ပညာရှင်ဦးထွန်းလွင်ဟာ လက်ရှိမှာလည်း Myanmar Climate Change Watch ကို ထူထောင်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသလို လူထုမိုးလေဝသဆိုင်ရာ အသိပညာ တိုးပွားဖို့လည်း ဒေသအသီးသီးမှာ ဟောပြောပွဲတွေ ကျင်းပလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း တိုင်း/ပြည်နယ် များမှာ ဟောပြောပွဲပေါင်း ၆ဝ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကုန်စည်ဒိုင်မှာ ဟောပြောမှုအနေနဲ့ မန္တလေးမှာ ပထမအကြိမ်နဲ့ အခုရန်ကုန်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ဟောပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ အကြောင်း ရင်းတွေထဲမှာ လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး (GDP) တိုး တက်ဖို့ မြေယာတွေ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတာတွေ၊ ဒီရေတောတွေမှာ စီးပွားရေး လုပ်ပြီး လူတွေနေထိုင်လာခြင်း၊ ကမ္ဘာမြေက စွမ်းအင်ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေဟာ အဓိကပါဝင်တယ်လို့ ဦးထွန်းလွင်က ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဥရောပမှာ မိုးရွာပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ မိုးခေါင်မှုဆိုတဲ့ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေ တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အယ်နီညှိ၊လာနီညာဖြစ်စဉ် မြန်ဆန်လာနေ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အနေနဲ့ အယ်နီညိုဆိုတဲ့ ပူနွေးတဲ့ ဖြစ် စဉ်၊ လာနီညာလို့ခေါ်တဲ့ အေးပြီးစွတ်စိုတဲ့ဖြစ်စဉ်၊ Neutral ဆိုတဲ့ ပုံမှန်ဖြစ် စဉ် ၃ မျိုးရှိရာမှာ အရင်က လာနီညာ နဲ့ အယ်နီညို ဖြစ်စဉ်ဟာ ၇ နှစ်မှ တစ် ကြိမ်သာဖြစ်လေ့၊ ပြောင်းလဲလေ့ရှိ တယ်လို့ ဦးထွန်းလွင်က ဆိုပါတယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ၂ နှစ် တစ်ကြိမ်ကနေ နှစ်စဉ် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂ဝဝ၉ ဇူလိုင်ကနေ ၂ဝ၁ဝ မတ်လအထိ အယ်နီညို၊ ၂ဝ၁ဝ မေကနေ ၂ဝ၁ဝ ဇူလိုင် အထိ ပုံမှန်နှစ်ရာသီဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁ဝ သြဂုတ်လကနေ ၂ဝ၁၁ အထိ လာနီညာဖြစ်လို့ ၂ဝ၁ဝ မှာ သုံးရောင်ခြယ် ရာသီဥတုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ မှာ တစ်နှစ်ရဲ့ အပူဆုံး ရာသီနှစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ အတွင်းမှာ အအေးဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နှစ်စဉ်အပူချိန်မြင့်တက်နေ ၁၉ဝ၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၆ ခုနှစ် အထိ နှစ်စဉ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လေ့လာချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမြောက် ဖျားပိုင်းနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသမှအပ ကျန်ဒေသတွေမှာ နှစ်စဉ်အပူချိန် ၁ ဒီဂရီနဲ့ ၂ ဒီဂရီကြားတိုးပြီး မိုးရွာနှုန်း အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီမှာ မိုးရွာရက်တိုးပြီး ကချင်ပြည်၊ ရခိုင်မြောက် ပိုင်း၊ မွန်၊ တနင်္သာရီတို့မှာ မိုးရေချိန်တိုးလာသလို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ညအပူချိန် နှစ်စဉ်တိုးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုတ်သုန်အားနည်းမှုဖြစ်လာ အရင်က မုတ်သုန်အဝင်အားကောင်းပေမယ့် ၁၉၇၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ မုတ်သုန်အားနည်းပြီး မုတ်သုန် အဝင်နောက်ကျခြင်း၊ မုတ်သုန်ဆုတ်စောခြင်းတို့ကြောင့် မိုးရာသီတိုတောင်းမှုတွေ ဖြစ်လာ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၇၈-၈၃ ခုနှစ်အတွင်း မုတ်သုန်လေ အလွန်အမင်း ကျဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်များကစပြီး မုတ်သုန်လေအားပျက် ပျောက်ကွယ်လာကာ မိုးတွင်းကာလမှာ မုတ်သုန်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှု လျော့နည်းလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပူအညွှန်းကိန်းများမြင့်တက်လာပြီး နှစ်စဉ်မိုးရွာသွန်းမှု လျော့နည်း လာကာ သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များ ပိုမို ကြုံတွေ့ လာရတယ်လို့ နှစ် ၅ဝ အတွင်း မှတ်တမ်းများအရ ရှင်းလင်းပါတယ်။ မိုးကြိုးနဲ့ မိုးလွန်မှာ မုန်တိုင်းပိုဝင်ရောက် ဒါကြောင့်လည်း ၁၉၇၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ မိုးတွင်းကာလ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်မှုလျော့နည်းပြီး မိုးကြိုနဲ့မိုးလွန်ကာလမှာ မုန်တိုင်းများလာတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ၁၉၇၇ မှ ၂ဝ၁၁ ထိ နှစ်ပေါင်း ၃၄ နှစ်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်း ၁၃ဝ၈ လုံး ဝင်ရောက်တဲ့အနက် မြန်မာနိုင်ငံကို ၈၄ လုံး ဝင်ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုန်တိုင်း ၈၄ လုံးထဲမှာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းက ဧပြီနဲ့ မေလမှာ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ အောက်တိုဘာ- နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေမှာ ဝင်ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို မိုးကြို၊ မိုးလွန်မုန်တိုင်းဖြစ်ခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေး အတွက်ပါ အန္တရာယ်များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိုးရာသီတိုတောင်းပြီး မိုးကြိုး၊ မိုးလွန်ရှည်လာ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက မေလ ၁၅ ရက်မှ ဇွန်လကုန်ထိ ၄၅ ရက်အတွင်း မိုးဦး၊ ဇွန်လကုန်ကနေ သြဂုတ်လကုန် ထိ ၆၂ ရက်မှာ မိုးလယ်နဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁ဝ ရက်အထိရက် ၄ဝ အတွင်း မိုးနှောင်းဆိုပြီး မိုးရာသီကာလ ၁၄၇ ရက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုတ်သုန်မဝင်မီ ဧပြီလ ၁၅ ရက်မှ မေလ ၁၅ ရက်ထိ ရက် ၃ဝ အတွင်း မိုးကြိုနဲ့ အောက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလကုန်ထိ ရက် ၅ဝ အတွင်း မိုလွန်ဆိုပြီး ရွာသွန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ မေလကုန်မှ ဇွန်လကုန်အထိ မိုးဦး၊သြဂုတ်လကန်ထိ ၆၂ ရက်ကို မိုးလယ်နဲ့ သြဂုတ်လကုန်မှ စက်တင်ဘာလလယ်အထိ မိုးလယ်နဲ့ သြဂုတ်လကုန်မှ စက်တင်ဘာလ လယ် အထိ ၁၅ ရက်ကို မိုးနှောင်းဆိုပြီး မိုးရာသီ(၁ဝ၇) ရက်ကို ကာလ တိုတောင်းလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိုးကြိုအနေနဲ့ ဧပြီလ ၁၅ ရက်မှ မေလကုန်အထိ ၄၅ ရက်နဲ့ စက်တင်ဘာလလယ်မှ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ရက်ပေါင်း ၇၅ ရက်မှာ မိုးလွန်ကာလအဖြစ် မိုးကြိုနဲ့ မွန်လွန်ကာလ ရှည်လျားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုတ်သုံကာလမှာ လေထု တည်ငြိမ်ပြီး နေရာ အနံှ့အပြား မိုးရက်ဆက် ရွာသွန်းမှုရှိပေမဲ့ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ လေဆင်နှာမောင်းကျရောက်ခြင်း၊ စိုက်ဆင်း လေပြင်းကျရောက်ခြင်းတို့ မဖြစ်ပေါ်တတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်မှုများလာ ဒါပေမဲ့ မိုးကြိုနဲ့ မိုးလွန်ကာလများမှာတော့ တိမ်တောင်များ ဖြစ်ပြီး လေထုမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ နေရာကွက်ကျားမိုးသည်းထန်ခြင်း၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ လေဆင်နှာမောင်းကျရောက်ခြင်း၊ စိုက်ဆင်းလေပြင်း ကျရောက်ခြင်း၊ မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးခြိမ်းခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း အများဆုံးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘေးအန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ် ပေါ်တက်တာ အဲဒီကာလ တွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မှာ မိုးကြိုး ပစ်ခံရလို့ သေဆုံးသူ ဦးရေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူပေါင်းရာကျော် တယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာမှာ နှစ်စဉ်မုန်တိုင်းဝင်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံကို မုန်တိုင်းဝင်ရောက် မှုဟာ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် မေလမှာ မာလာ မုန်တိုင်း၊ ၂ဝဝ၇ မေလမှာ အာကတ်ရှ် ၂ဝဝ၈ မေလမှာ နာဂစ်၊ ၂ဝဝ၉ မေလ မှာ ဘီဂျလီနဲ့ ၂ဝ၁ဝ အောက်တိုဘာ လမှာ ဂီရိတို့ဖြစ်ပြီး ငါးနှစ်ဆက်တိုက် ဝင်ရောက်တဲ့မုန်တိုင်းများမှာ လေးနှစ် ဆက်တိုင်ဟာ မေလအတွင်းမှာ ဝင် ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမုန် တိုင်းငါးလုံးဟာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်၊ ရာသီ၊ တည်နေရာ အားလုံး ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နာဂစ်မုန်တိုင်း ကတော့ သွားရာ လမ်းကြောင်း ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက် အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ မြန်မာ့မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် ၂ဝ၁၁ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဇွန်လ အတွက် အချို့ဒေသတွေမှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကယားစတဲ့ဒေသတွေမှာ ပုံမှန်အထက် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရွာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မေ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှအပ ကျန်ဒေသတွေမှာ ပုံမှန်အထက်ရွာနိုင် ဖွယ်ရှိပြီး၊ အပူချိန်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၁ ဇွန်လအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်မြဲခန့်၊ အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဖြစ်မြဲအောက် နိမ့်ကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများ အတွက် ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာ အပူချိန်ဖြစ်မြဲ ခန့် ရှိနိုင်ပြီး၊ ကျန်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်မြဲအောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်း ပြော ကြားပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ အတွက် အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ် မိုးလေဝသ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့အတွက် မိုးရွာသွန်းမှုအနေနဲ့ ဇွန်လမှာ ပုံမှန်ရွာ သွန်းပြီး၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လများမှာ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာ မိုးပိုလာနိုင်ပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ အချို့ဒေသ တွေမှာ မိုးပါးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အပူချိန်အနေနဲ့ ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လတွေမှာ တရုတ်မှာပူပြီး အိန္ဒိယမှာ အပူလျော့နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလတွေမှာ အိန္ဒိယပုံမှန် ဖြစ်နိုင်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မိုးခေါင် ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်နိုင် တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မိုးလေဝသပညာရှင်များ မွေးထုတ်ဖို့လို ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွေကို တုန့်ပြန်ရာမှာ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှု လျော့ပါးအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာ နည်းပညာ မြောက်များစွာလိုအပ်လို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက် ပြောင်းလဲတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ အညီ လိုက်လျောညီထွေ နေမယ်ဆိုရင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနည်းမယ် လို့ ဦးထွန်းလွင်က အကြံပြုထားပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေ တဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ကြိုတင်သိရှိ နိုင်ဖို့ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ သင်ကြားပေး ဖို့လိုပြီး ပညာရှင်မြောက် မြားစွာ မွေးထုတ်ဖို့နဲ့ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများလည်း လိုအပ်နေသေး တယ်လို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ပြည်သူလူထုအတော်များများဟာ မိုးလေဝသကို အလေးထားလာသလို အသိအမြင်လည်း တိုးပွားလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုထက်ပိုမို တိုးတက်သိမြင်ပြီး ရှောင်ကြဉ်သတိ ထားနိုင်ဖို့လည်း ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဆက်လက် အသိပေးသွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေ အရောက် လက်ဆင့်ကမ်းသင့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီလိုပြောင်းလဲမှု မြန်ဆန်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိရှိပြီး ကြိုတင် ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေသာမက ဆက်စပ်လုပ် ကိုင်နေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များအနေနဲ့လည်း ကိုယ်တိုင် အသိ ြွကယ်ဝဖို့ အပြင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ကို သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေဖို့ အရေးပါလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယခုလို မိုးကြို၊ မိုးနှောင်းတွေမှာ ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်က ကင်းလွတ်စေဖို့ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်သိမြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ယခုလို ဟောပြောပွဲများကို တောင်သူတွေရှိရာ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများ အရောက် လက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ကျေးလက်နေပြည်သူများ အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိုက်ပျိုးကာလ၊ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ကာလတွေမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ နည်း နိုင်သမျှ နည်းအောင်လည်း မျိုးစေ့၊ ခေတ်မီလယ်ယာ သုံးစက် ပစ္စည်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် ရိတ်သိမ်းေြွခလှေ့စက်တွေ၊အခြောက်ခံ စက်တွေ၊ကုန်သယ်ယူတဲ့ထရပ်ကားတွေ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖြည့်ဆည်းဝန် ဆောင်ပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေအရ စားနပ်ရိက္ခာပြဿနာဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းကြီး ထွားလို့လာနေတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မိုးလေဝသ ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ကြိုတင်သိရှိပြီး၊ စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ စိုက်ပိုျးထုတ်လုပ်တဲ့ တောင်သူသာမက ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုန်သည်၊ အသင်းအဖွဲ့များ နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများက Public Private Partnership အရ ပိုမို ပူးပေါင်း ဆောင်ကြရင်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့ Climate Change စိန်ခေါ်မှုကြီးကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရင်ဆိုင်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းပါ။
အကျိုးအမြတ်မျှတပြီး စားသုံးသူဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုမရှိစေရေး တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသွားမယ့် စားအုန်းဆီလုပ်ငန်းရှင်များ စားအုန်းဆီဟာ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် ဆန်ပြီးရင် ဒုတိယအရေးပါတဲ့ ကုန်စည်ဖြစ်သလို လူချမ်းသာရော လူလတ်တန်းစားအားလုံး နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဘီစကစ်၊ မာဂျရင်း၊ နို့ဆီက အစ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာပါ ထည့်သွင်းပါဝင်နေပါတယ်။ ဟိုးယခင်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းထွက်ရှိတဲ့ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ အစရှိတဲ့သီးနံှဆီနဲ့ ပြည်တွင်းဖူလုံမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း လူဦးရေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဆီစားသုံးမှုနဲ့ စက်မှုသုံးအတွက် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်ကို ပြည်ပက စားအုန်းဆီတင်သွင်းပြီး ဖြည့်ဆည်းခဲ့ ရပါတယ်။ ရာသီအချိန်အခါလိုက် စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှု အတိုးအလျော့ရှိ အဲဒီလို တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာမှ ဆီထွက်သီးနံှ ထုတ်လုပ်တဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ အကျိုး၊ ပြည်တွင်းဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အကျိုး ကို မထိခိုက်စေဘဲ ပြည်တွင်းစားသုံးသူတွေ ဖူလုံမှုရှိအောင်နဲ့ ဈေးနှုန်း ဖိစီးမှုမဖြစ်စေအောင် လစဉ်လိုအပ်ချက်ကို ချိန်ညှိပြီး တင်သွင်းစေ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ် သုံးနှစ်အတွင်း တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပမာဏအပေါ် ပျမ်းမျှတွက်ချက်မှုအရ တစ်လကို တန်ချိန် ၂ သောင်းကျော် တင်သွင်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့ ဆောင်းပဲ၊ မိုးပဲဆီထွက်သီးနံှ ပေါ်ချိန်မှာ တင်သွင်းမှုကျဆင်းပြီး ပြည်တွင်းဆီထွက်ချိန်လည်း မဟုတ်တဲ့ ပွဲတော်ကာလများမှာတော့ တင်သွင်းမှုမြင့်တယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆီလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဆီကုန်သည်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဟန် က ပြောကြားပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်ကို ပဓာဏမထားဘဲ ပုံမှန်တင်သွင်းသူကို ခွင့်ပြု ယခင်က အစိုးရတာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ထဲကသာ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခဲ့ရာမှ ယခုအခါမှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ အားလုံး လုပ်သာကိုင်သာရှိစေဖို့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကို တင် သွင်းခွင့်ပြုနေပြီလို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနက သိရပါတယ်။ ဒီလိုတင်သွင်း ခွင့်ပြုရာမှာ လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း တင်သွင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်လ တင်သွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို နိုင်ငံ တကာဈေးနဲ့ ပြည်တွင်း ဈေးများ တက် သည်ဖြစ်စေ၊ ကျသည် ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့ရဲ့ အကျိုး အမြတ်တစ်ခ ထဲကို ပဓာဏမထားဘဲ ပုံမှန်တင်သွင်းသူတွေကို ခွင့်ပြုသွားဖို့ အသင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတို့ ညှိနှိုင်းထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပထမအသုတ်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ၁ဝ ဦးမှ စတင် တင်သွင်းလျက်ရှိရာ မေလ ၁၂ ရက်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက တင်သွင်း ထားတဲ့ ဆီသင်္ဘောဆိုက်ရောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ကျန်လုပ်ငန်း ရှင်များရဲ့ ဆီသင်္ဘောများလည်း ဆက်တိုက်ဝင်ရောက်လာတော့ မယ်လို့ သိရပါတယ်။ စားအုန်းဆီတင်သွင်းသူများရဲ့ တာဝန်ပိုင်း တင်သွင်းမယ့်ကုမ္ပဏီများဟာ စားအုန်းဆီ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးမှုမှာ ကာလကြာရှည်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်နဲ့အညီ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များကို ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တင်သွင်းသူများ ဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး ဈေးကွက် မပြတ်လပ် စေရေး ပုံမှန်တင်သွင်းနိုင်သူ၊ သိုလှောင်မယ့်စနစ်နဲ့ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသူဖြစ်တဲ့အပြင် တင်သွင်းသူလက်ကားဖြန့် ဖြူးသူ၊ လက်လီရောင်းချသူတို့အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်စရိတ်နဲ့ အကျိုး အမြတ်မျှတပြီး စားသုံးသူ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု မရှိစေရေး ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှာ ဝန်ခံကတိပြုထားတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် စားသုံးသူ ကျန်းမာရေးမထိခိုက်စေဖို့ အမျိုးအစား အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စားအုန်းဆီကို တင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်း ဖြန့်ဖြူးရာမှာလည်း ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူများ၊ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက် များရှိ ပြည်သူများ အဆင်ပြေစားသုံးနိုင်ဖို့ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်လှစ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ရောင်းချသွား မယ်လို့လည်း တညီတညွတ်တည်း သဘောတူထားကြောင်း သိရပါ တယ်။ လစဉ်ပုံမှန်တင်သွင်းမယ်လို့ဆို တင်သွင်းရာမှာလည်း ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်ပမာဏ မမီဘဲ တင်သွင်းမှုနည်းရင် ပြည်တွင်းမှာ ကုန်ပစ္စည်း ပြတ်လပ်ပြီး ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု တွေ ဖြစ်နိုင်သလို လိုတာထက် အလွန် အမင်း ပိုလံျှတင်သွင်းပြန်ရင်လည်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီဈေး တွေ ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ တောင်သူတွေ၊ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆီတင်သွင်းသူ တွေအနေနဲ့လည်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပြီး ဈေးကိုက် တဲ့အချိန်မှာ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပြီး အကျိုးအမြတ် မရှိချိန်မှာ တင်သွင်း ခြင်းမပြုတာမျိုးတွေမရှိရအောင် ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ လစဉ်ပုံမှန်တင်သွင်းရမယ့် ပမာဏတွေလည်း ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြည်ပက တင်သွင်းရောက်ရှိလာတဲ့ ဆီတွေကို သိုလှောင် ထားဖို့ သိုလှောင်ကန်အသင့်မရှိသေးတဲ့ ကုမ္ပဏီများအတွက် အဆင် ပြေစေဖို့ အထုတ်အသွင်းအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့နဲ့ စနစ်တကျဖြန့်ဖြူးမှု အပိုင်းတွေကိုလည်း အသင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်မူဝါဒများအတွင်းက ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း အသင်းဥက္ကဋ္ဌက ဆိုပါတယ်။ စားသုံးသူတွေ အာမခံချက်ရှိတဲ့ဆီသာ ဖြန့်ဖြူးမယ် နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ပါဝင်နေတဲ့ စား အုန်းဆီဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ဖို့ အဓိကကျလှပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆီတင်သွင်းရာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး စားသုံးဖို့ သင့်တော်တဲ့ဆီ (Fit for Human Consumption )ဖြစ်ဖို့ စံချိန် စံညွန်းများနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဆီကိုသာ တင်သွင်းဖို့ သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက တင်သွင်းလာတဲ့ စားအုန်းဆီများ အရည်အသွေး မှန်၊ မမှန်ကို FDA က နမူနာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ပြည်သူလူထုစားသုံးဖို့ သင့်တော်တဲ့ ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ ပြည်တွင်းမှာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စားသုံးသူတွေလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ရေရှည်အဆင်ပြေပြီး ဈေးတည်ငြိမ်ရေး အချိုးကျဖြန့်ဝေ ပြည်တွင်းဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းမှာ ယခင်ကတင်သွင်းမှု ပမာဏရဲ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို တင်သွင်းအဖွဲ့အစည်းက ဈေးကွက်တွေကို တာဝန်ယူဖြန့်ဖြူးပြီး ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပမာဏကိုတော့ နေပြည်တော် ကုန်ဈေးနှုန်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆီကုန်သည်နဲ့ ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် အရောင်း ဆိုင်များကတစ်ဆင့် စားသုံးသူတွေထံကို တိုက်ရိုက် လစဉ် ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့တယ်လို့ အသင်းဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်များ တင်သွင်းလာတဲ့ဆီကိုလည်း အချို့ ပမာဏကို ပြည်ထောင်စုကုန် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နဲ့ ဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစ်ဆင့် စားသုံးသူထံ တိုက်ရိုက် ရောင်းချ ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကျန်ပမာဏကိုတော့ တင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးဖို့ စီစဉ်ညှိနှိုင်းထားကြောင်း အသင်းမှ သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရတာကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်နဲ့ စားသုံးသူတွေ အတွက်လည်း ဈေးတည်ငြိမ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စားသုံးသူထံအရောက် ဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းက ကြီးကြပ်မယ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့် လက်လီဆိုင်များ ဖြန့်ဖြူးရာမှာလည်း ဝင်ငွေနည်းတဲ့ပြည်သူများ အများစုနေထိုင်တဲ့ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်၊ ဈေးစတဲ့နေရာများနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အများစုနေ ထိုင်ရာ ရပ်ကွက်တွေမှာ လက်လီဆိုင်များ တိုးခဲျ့ဖွင့်လှစ်ဖို့လည်း စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ အသင်းပိုင်းက ဒီလို စည်းကမ်းတကျစီစဉ်နေပြီဖြစ်လို့ စားသုံးသူလက်ထဲ တိုက်ရိုက် ရောင်းချနေတဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်များကလည်း ဈေးနှုန်းမှန်ကန် တည်ငြိမ်ရေး စနစ်တကျဖြန့်ဖြူးသွားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေကို ဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ လက်လီဆိုင် တွေအရောက် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြန့်ချိဖို့လိုသလို တင်သွင်းကုမ္ပဏီများ ကလည်း မိမိအကျိုးအမြတ်တစ်ခုကိုသာ မကြည့်ဘဲ စားသုံးသူ လက်ဝယ်အရောက် အမှန်တကယ်ဖြန့်ဖြူးပေးမှသာ စားသုံးသူတွေ ဈေးနှုန်း ဝန်မပိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုမ္ပဏီများမှ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို အမြတ်ငွေပေး၊ အမည်ခံစေပြီး ဆီကို ပြင်ပဈေးကွက်မှာ ရောင်းချမှုမျိုးတွေမရှိအောင်လည်း အသင်းက ကြီးကြပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်ရောင်းဈေးနဲ့ ပြင်ပဈေးကွာဟမှု မများစေလို လုပ်ငန်းရှင်များ တင်သွင်းလာတဲ့ စားအုန်းဆီကို အသင်းမှ တစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးရာမှာ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုအနေနဲ့ ယခင်အစဉ် အလာလည်း မပျက်ဘဲ တင်သွင်းကုမ္ပဏီ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိဖို့အပြင် စားသုံးသူများ သင့်တင့်မျှတစွာ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ဖို့လည်း နိုင်ငံတကာ ပေါက်ဈေးပေါ်အခြေခံပြီး တွက်ချက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးအကွာ အဝေးအရ လက်လီရောင်းချသူများရဲ့ တစ်ပိဿာအပေါ် အမြတ်တင်မှုကိုလည်း ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တင်သွင်းကုမ္ပဏီက ကျန်တဲ့ပမာဏကို မိမိအစီအစဉ်နဲ့ ဖြန့်ဖြူး ရာမှာ လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ မိမိတို့ကုမ္ပဏီအကျိုး၊ နိုင်ငံတော် အကျိုးအပြင် အခြေခံကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေးကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်း စားပြီး ကိုယ်စားလှယ်ရောင်းဈေးနဲ့ ကွာခြားမှုမများဘဲ ထိုက်သင့်တဲ့ ဈေးနဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးမယ်ဆိုရင် စားသုံးသူတွေ သက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဈေး နှစ်ခုအကြား ကွာဟမှုမများ ဘူးဆိုရင် နေ့ဈေးတစ်မျိုး၊ ညဈေးတစ်မျိုး ဆွဲတင်ဆွဲချ၊ အတက် အကျ ကြမ်းတာမရှိနိုင်တော့ဘဲ ဈေးတည်ငြိမ်မှာဖြစ်လို့ ရေရှည်မှာကုမ္ပဏီအတွက်လည်း အကျိုးရှိမှာ အသေအချာပါ။ စားသုံးသူ တွေလည်း ဝမ်းသာကြမှာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
အိန္ဒိယရဲ့ ပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်မည်ဆိုသော ခန့်မှန်းချက်များနှင့် တွေးဆဖွယ်ရာများ အိန္ဒိယပဲလျော့သွင်းမယ့် သတင်းများထုတ်ပြန်နေ ယခုတလော မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကပဲဖောက်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သတင်းတွေမှာ ပဲအထွက်မြင့်တက်လို့ ဒီနှစ်ပြည်ပက ပဲလျှော့သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို တွေ့နေရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က သတင်းတစ်ခုမှာ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ (ဇူလိုင်- ဇွန်) သီးနံှရာသီအတွင်း မနှစ်က တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပဲမျိုးစုံတန်ချိန် ၃ ဒသမ ၅ သန်းထက် ၁၄ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျပြီး တန်ချိန် ၃ သန်းလောက်သာ သွင်းရမယ်လို့ ကုန်သည်တွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မေလ ၅ ရက်နေ့ သတင်းတစ်ခုမှာလည်း ၂ဝ၁ဝ-၁၁ အတွင်း ပဲမျိုးစုံတန်ချိန် ၂ ဒသမ ၇၅ သန်း တင်သွင်းခဲ့ရတယ်လို့ အစောပိုင်းခန့်မှန်းခဲ့ပြီး ဧပြီလ ၁ ရက်မှာ စတင်တဲ့ လက်ရှိ ၂ဝ၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ပဲမျိုးစုံတင်သွင်းမှုဟာ တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၅ သန်းမှ ၁ ဒသမ ၇၅ သန်းဝန်းကျင်သာ တင်သွင်းရလိမ့်မယ်လို့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားပြန်ပါတယ်။ ပဲအထွက်မြင့်တက်အောင် အထူးစီမံကိန်းများနဲ့ ဆောင်ရွက် လူဦးရေထူထပ်များပြားပြီး ပဲကို အဓိကထားစားသုံးတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းမှာ စားနပ်ရိက္ခာရောင်းချမှု ဖူလုံအောင်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှု မြင့်တက်ဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားနေသလို အစိုးရအနေနဲ့လည်း နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုရရှိဖို့ အရေးပါတဲ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်း မတက်အောင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမရှိအောင် ဘက်ပေါင်းစုံက ဆောင်ရွက်နေ တာတွေ့ရပါတယ်။ ပဲအထွက်မြင့်တက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုတွေအနေနဲ့ အထူးစီမံကိန်း တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပဲမျိုးစုံအရှိန်အဟုန် မြင့် ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ် (A3P) လို စီမံကိန်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေသလို ပဲမျိုးစေ့သစ်များ ထုတ်လုပ်ပြီး၊ စောစီးစွာ ရင့်မှည့်ထွက်ရှိတဲ့ အထွက်နှုန်းကောင်းတဲ့ မျိုးစေ့တွေ စိုက်ပျိုးဖို့ သုတေသနနဲ့ နည်းပညာကောင်းတွေနဲ့ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးတာတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တွေကြောင့် ပဲပိုစိုက်လို့ အထွက်တိုး ဒါတင်မကသေးပါဘူး။တောင်သူတွေ ပဲပိုစိုက်ချင်လာအောင် စိုက်ဧရိယာတွေတိုးခဲျ့ လာအောင်လည်း အဓိကကျတဲ့ ပဲတွေအတွက် အနိမ့်ဆုံးထောက်ပံ့ဈေးနှုန်း (MSP) တွေကိုလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးမြင့်ပြီး တွန်းအားပေးနေတာတွေလည်း သိရပါတယ်။ အဲဒီလို ထောက်ပံ့စီစဉ်ပေးမှုတွေကြောင့်လည်း အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းတွေအရ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ အတွင်း ပဲမျိုးစုံစိုက်ဟက်တာ ၂၃ ဒသမ ဝ၅ သန်း စိုက်ခဲ့လို မနှစ်ကထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိုက်ဧကတွေ ပိုတိုးစိုက်လာသလို ပဲစိုက်ချိန် ရာသီဥတုကလည်း အိန္ဒိယတောင်သူတွေကို မျက်နှာ သာပေးခဲ့လို့ ၂ဝဝ၉-၁ဝ မှာထွက်ရှိတဲ့ တန်ချိန် ၁၄ ဒသမ ၆၆ သန်းထက် ဒီနှစ်မှာ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ပြီး တန်ချိန် ၁၇ ဒသမ ၂၉ သန်းအထိ ရှိလာမယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဈေးမတက်အောင်လည်း စီမံ ဒီလိုအထွက်ပိုလာအောင် ဆောင်ရွက်နေတာတင်မက လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့ လူဦးရေကို အမီလိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးလို့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ ကြီးမြင့်မှုမရှိရအောင်လည်း အစီအမံ ပေါင်းများစွာ ချမှတ်တာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းချမှု မပြတ်လပ်ရအောင် ကာဘူလီကုလားပဲကလွဲပြီး အခြားပဲ မျိုးစုံကို ပြည်ပတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်တာကိုလည်း တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် သက်တမ်းတိုးနေသလို ပြည်ပက တင်သွင်းပဲတွေကို ဈေးကွက် ပေါက်ဈေးထက် တစ်ကီလို ရူပီး ၁ဝ (ကန်ဒေါ်လာ ဝ ဒသမ ၂၂) လျှော့ပြီး အများပြည်သူဖြန့်ဝေရေးအစီအစဉ် (PDS ) နဲ့လည်း ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေပြီး အဲဒီလို ဖြန့်ဝေပေးဖို့ တင်သွင်း လာတဲ့ နိုင်ငံပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုအတွက် ပြန်လျော်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ပံ့ ပေးမှုတွေလည်း လုပ်ပေးပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာလည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးဖို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ ကျားကြီးခြေရာကြီးဆိုသလို ခြေလှမ်းကျယ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့ တခြားနိုင်ငံတွေကို အားထားနေရမှု လျှော့ချဖို့အတွက် အီသီယိုးပီးယားလို အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ ပဲမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ဖို့ အိန္ဒိယတောင်သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နံှမှုတွေ တိုးခဲျ့လုပ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံပိုင် အဖွဲ့အစည်း ဦးဆောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီအစု အဖွဲ့ကလည်း လက်တင်အမေရိကားမှာ ကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ်နဲ့ ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဖို့ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကနေဒါနဲ့ မာလာဝီတို့ကလည်း အိန္ဒိိယဈေးကွက်ကို မျက်စိကျ အဲဒီလို အိန္ဒိယက အခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ပဲထုတ်လုပ်ဖို့ စီမံဆောင်ရွက်နေသလို ပဲဝါလေးအဓိကထုတ်တဲ့ ကနေဒါနဲ့ ပဲစင်းငုံ ထုတ်လုပ်တဲ့ မာလာဝီနိုင်ငံတွေကလည်း ဈေးကွက်ကြီးမားတဲ့ အိန္ဒိယ ကို မျက်စိကျပြီး ဈေးကွက်ပိုရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပဲစင်းငုံကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချနေတဲ့ မာလာ ဝီအစိုးရက အိန္ဒိယရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး ပဲတောင်သူတွေ ပဲပိုစိုက်ဖို့ တွန်းအားပေးနေလို့ လက်ရှိမှာ ပဲမျိုးစုံတန် ချိန် ၅ဝဝဝဝ ခန့် တင်ပို့နေရာက ပမာဏများများတင်ပို့မယ့် အလား အလာတွေရှိနေပါတယ်။ ကနေဒါက အိန္ဒိယရဲ့ ပဲစင်းငုံဈေးကွက်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ အစားထိုးပဲများနဲ့ စမ်းသပ် ကမ္ဘာ့ပဲတင်ပို့မှုမှာ ထိပ်ဆုံးကပြေးနေတဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံကလည်း ရရှိပြီးသာ ဈေးကွက်ဝေစုနဲ့ အားမရလို့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မတ်လမှာ ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့် ဦးဆောင်ပြီး ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဟာ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွေကို ခြေဆန့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ ပဲဝါလေးတင်ပို့မှု စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရိုးရာအစားအစာတွေကို ပဲရာဇာ (အစိမ်း)နဲ့ အစားထိုး အသုံးပြုဖို့ စမ်းသပ်ခဲ့ရာမှ စတင်လက်ခံလာပြီလို့ သိရပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာ ပဲစင်းငုံကို အဓိကစားသုံးပြီး အခုလို ပဲရာဇာ (အစိမ်း)ကို လက်ခံစားသုံးမှု လေ့လာချက်အရ အိန္ဒိယတင်သွင်းနေတဲ့ ပဲစင်းငုံဈေးကွက် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း၊ တစ်နည်းဆိုရင် တန်ချိန် ၂ သိန်း လောက်ရရှိတဲ့ ဈေးကွက်ကို ကနေဒါ ရယူသွားမယ့် အလားအလာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ ပဲဝါလေးကို အိန္ဒိယကုန်သည်နဲ့ စားသုံးသူတွေ ပိုစိတ်ဝင်စားလာ ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်း ခေါင်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ရတဲ့ ကနေဒါ၊ ယူကရိန်းနဲ့ အမေရိကန်တို့က ပဲဝါလေးကို ဈေးကွက်ဖြန့်ဖို့ ကုန်သည်တွေ ပိုကြိုက်လာ ကြသလို စားသုံးသူတွေကလည်း ဈေးကြီးမြင့်တဲ့ ပဲစင်းငုံအစားထိုး ပဲဝါလေးသုံးစွဲမှုလည်း ကြီးထွားလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လတ်တလောအိန္ဒိယမှာ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းတွေထက်ဝက်နီးပါးကျဆင်း လာနေပေမဲ့ ပဲဝါလေးခွဲခြမ်းဈေးက နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ တစ်ကီလို ရူပီး ၁၅-၁၈ (ကန်ဒေါ်လာ ဝ ဒသမ ၃၄-ဝ ဒသမ ၄၁ )နဲ့ ဈေးအချိုဆုံးဖြစ်လို့ နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံပိုင် အေဂျင်စီ တွေက အမြတ်အစွန်းပိုရတဲ့ ပဲဝါလေးလို ပိုသွင်းမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်တင်သွင်းမယ့် ပဲပမာဏရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးဟာ ပဲဝါလေးပဲ ဖြစ်မယ်လို့လည်း လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေက သုံးသပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ လျှော့သွင်းမယ့်ပဲ ဘာပဲလဲ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဖက်က ရရှိတဲ့ သတင်းတွေအရ ဒီနှစ်မှာ ပဲမျိုးစုံ တင်သွင်းမှု ပုံမှန်ထက် တစ်သန်းလောက် လျော့ကျမယ်ဆိုတော့ လျှော့သွင်းမယ့်ပဲတွေက ဘာပဲတွေလဲဆိုတာ ပဲတင်ပို့နိုင်ငံတွေအနေ နဲ့ လေ့လာထားသင့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ရဲ့ မိုးနဲ့ဆောင်း ပဲအထွက်ခန့်မှန်းထားတာတွေကတော့ မတ်ပဲက မနှစ်ကထက် ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီး တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၈၂ သန်း၊ ပဲစင်းငုံက ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီး တန်ချိန် ၃ ဒသမ ၁၅ သန်းနဲ့ ပဲတီစိမ်းက ၂၂ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီး တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင် နှုန်း ထွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယပဲစင်းငုံဈေးကွက်ပေါက်ဈေးက အစိုးရပေးတဲ့ ဈေးအောက်ရောက်လို့ရေ ကဲ ဒါဆိုရင် ဆေးဝါးအဖြစ်ရော အဓိကမရှိမဖြစ်အနေနဲ့ပါ စားသုံးတဲ့ ပဲစင်းငုံဟာ အိန္ဒိယဈေးကွက်မှာ မှေးမိန်လာမလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ သေချာတာတစ်ခုက အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ မနှစ်က ပဲလက်ကျန်အချို့နဲ့ အတူ ဒီနှစ်ပဲစင်းငုံက အထွက်ပိုခဲ့လို့ မြန်မာနိုင်ငံ က နှစ်စဉ်တင်သွင်းနေတဲ့ ပမာဏထက် လျော့တာကတော့ အထင် အရှားပါပဲ။ အိန္ဒိယဈေးကွက်ထဲကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဇန်နဝါရီ လကုန်ပိုင်းကနေ ပဲစင်းငုံရိတ်သိမ်းမှု စတင်ခဲ့တာ အခုချိန်ထိ အချို့ ပြည်နယ်တွေမှာ ရိတ်သိမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကွက်တွေကို ပဲအသစ်ဝင်ရောက်မှု မရပ်သေးလို့ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးက အစိုးရ ပေးတဲ့ အနိမ့်ဆုံးထောက်ပံ့ဈေး (MSP ) ရူပီး ၃ဝဝဝဝ (ကန်ဒေါ်လာ ၆၇၃) အောက်ကျနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံပိုင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ ဈေးမြင့်ပေးဝယ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တွေအနေနဲ့ လက်ရှိဈေးထက် မြင့်စေလိုနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လတ်တလောမှာ အိန္ဒိယ ပဲမျိုးစုံဈေးက ကုလားပဲကလွဲပြီး ကျန်ပဲတွေ အကျဘက်ဆင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ သတင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ဖို့လို ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပဲတင်ပို့သူတွေအနေနဲ့ အိန္ဒိယက ပဲလျှော့သွင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ လေ့လာသုံးသပ်သင့်ပါပြီ။ လတ်တလော တကယ်တမ်းထွက်ရှိလာတဲ့ သတင်း နှစ်ပုဒ်မှာ ပထမသတင်းအနေနဲ့ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ (နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လမှ နောက်နှစ် ဇွန်လအထိ) သီးနံှရာသီမှာ တန်ချိန် ၃ သန်း လောက်သွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပြီး ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ ၂ဝ၁ဝ- ၁၁ အတွင်း တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၇၅ သန်းဝန်းကျင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းတွေအရ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ခုနှစ်မှာ ပဲ တင်သွင်းမယ့် ပမာဏကိုလည်း ပြောင်းလဲခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ မီဒီယာကို ဗျူဟာတစ်ရပ်လို အသုံးချတာမခံရဖို့လည်း သတိရှိစေချင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ မီဒီယာကို ဗျူဟာတစ်ရပ်လို အသုံးချပြီး ပဲရောင်းချနိုင်ငံတွေကို ဖိအားပေးနေသလားဆိုတာလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလမှာ အအေးလှိုင်း ရာသီ ဥတုကြောင့် အိန္ဒိယပဲအထွက်လျော့မယ်လို့ သတင်းဖြန့်ပြီး ပဲအသစ်စပေါ်ချိန် အိန္ဒိယမှာရော မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ အချို့ဈေးကစားခဲ့သေးတယ်လို့ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးက ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီလို ဈေးမြှောက်ခဲ့တဲ့ အချိန် ဝယ်လှောင်ထားမိတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများ ဈေးတွေတရိပ်ရိပ်ကျလာတော့ မလူးသာမလွန့်သာနဲ့ ပိုက်မိ နေတာ အိန္ဒိယမှာရော ကျမတို့ပြည်တွင်းမှာပါ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ရရှိတဲ့ သတင်းနဲ့ တကယ့်မြေပြင် အခြေအနေတွေကို စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်မှသာ တန်ကာကျမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြည်တွင်းပဲ အထွက်ကောင်းဖို့ အသင်းရဲ့ အစီအမံ အိန္ဒိယက တကယ်လျှော့သွင်းမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပဲတွေကို ဘယ်လိုအစီအမံတွေ လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံ၊ ပြောင်းနှမ်းကုန်သည်များအသင်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုဦးက ခုလိုပြောပြပါတယ်။ '' ပဲလျှော့သွင်းမယ့်သတင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိ လေ့လာမယ်၊ လျှော့သွင်းမယ့် ပဲက ဘာပဲတွေလည်းဆိုတာ စုံစမ်းမယ်၊ ကိုယ့်ဘက်က ပဲတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်တင်ပို့နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို အမြန်ဆုံးစီမံပါမယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ဈေးကျဆင်းမှုရှိပေမဲ့ မတ်ပဲက ပုံမှန်အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပဲတီစိမ်းအနေနဲ့ မိုးမိပဲတစ်ချို့ အရည်အသွေး နိမ့်တဲ့အတွက် ဈေးလျော့သလို လတ်တလော တရုတ်က အဝယ် နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ အထိုက်အလျောက် ရောင်းဝယ်မှုရှိပါတယ်။ ပဲစင်းငုံလည်း ဟိုဘက်မှာဈေးကျလို့ ဒီမှာ ဈေးလျော့လာတယ်ဆိုပေ မဲ့ အရောင်းအဝယ်အသင့်အတင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ မေလ၊ ဇွန်လမှာ တင်ပို့မှုများနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတိထားရမှာက အာဖရိက ပဲစင်းငုံတွေ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လမှာ ဈေးချပြီးဝင်လာတတ်တဲ့အတွက် အဲဒီကာလအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိတာ စီမံသွားမယ်လို့''ဆိုပါတယ်။ ရောင်းသင့်တဲ့ အချိန် မရောင်းမိလို့ ပိုက်မိနေတာလည်း ပြဿနာ အိန္ဒိယပဲလျှော့သွင်းမယ့် သတင်းတွေ၊ လက်ရှိပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေအရ ဝါရင့်ကုန်သည်ကြီး တစ်ဦးကလည်း ''အိန္ဒိယ ဝယ်လက်တွေ ဒီနှစ်ပဲစင်းငုံဝယ်တဲ့ ပမာဏလျော့တယ်။ အဝယ်ရှိတဲ့ ပဲတွေကျတော့လည်း ဒီဘက်က ကုန်သည်တွေဈေးမကိုက်တော့ အရောင်းအဝယ်အထိုက်အလျောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အရင်နှစ်တွေလို မှန်မှန်သွက်မနေဘူးပေါ့ဗျာ။ ပဲစပေါ်ချိန် ဈေးအမြင့်နဲ့ ဝယ်ယူထားတဲ့ ကုန်သည်ကြီးတွေ လက်ရှိဈေးနဲ့ မကိုက် တော့ ပိုက်မိနေကြတယ်။ ဒီတော့ ငွေလည်ပတ်မှုမရှိဘဲ ငွေကြပ်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်ရတာပေါ့။ အမှန်တော့ ရောင်းသင့်တဲ့ အချိန်မှာ မရောင်းမိကြလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာပါလို့'' ထောက်ပြပါတယ်။ အိန္ဒိယဖက်က အဖြစ်မှန် သတင်းတွေကို ရရှိအောင် ဆောင် ရွက်ပြီး ပဲတင်ပို့မှုကို ဘယ်လိုစနစ်နဲ့စီမံဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ စဉ်းစား သင့်ပါပြီ။ ပဲ Supply Chain မှ ပါဝင်သူတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ နောင်နှစ်တွေမှာဈေးကွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိတဲ့ ပဲနဲ့ အခြား သီးနံှတွေကို ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးဖို့၊ အိန္ဒိယဈေးကွက်အစား အခြား ဈေးကွက်တွေကို တိုးခဲျ့ဖို့ ပဲကုန်ကြမ်း ဈေးကွက်အားနည်းရင် တန်ဖိုး မြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်ပြီး ဈေးကွက်ရှာဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကနေဒါ နည်းလမ်းကို နမူနာယူပြီး အိန္ဒိယအပြင် တစ်ခြားပဲစားသုံးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပဲစင်းငုံပိုစားဖို့ လေ့ကျင့်ဈေးကွက်ရှာဖို့ ကြိုးစားကြမလား၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်သေးဘူး ဆိုရင် အိန္ဒိယစားသုံးသူတွေလည်း ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပြီး တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားတဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ရောင်းနိုင်အောင် မိမိတို့နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းနည်း နဲ့ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြမလား စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတိုင်းက မိမိတို့ ပြည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံအောင်၊ တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်လို့ မိမိ တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပဲဈေးကွက်မှာ ဒုတိယအများဆုံး တင်ပို့မှု နေရာက ထပ်မကျဆင်းရအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်သည်၊ ပြည်ပ တင်ပို့သူတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပူးပေါင်း ဆွေးနွေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်ဖို့ လိုပါကြောင်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ ယမင်းရွှေစင်